ရန်ကုန်မှာ ပြန်ဆုံတယ် – Grab Love Story
ရေးသူ .. လှည်းတန်း က ဘဲရမ်း
စိုးအောင် အမေရိကန်ပြည်ကို ရောက်လာခဲ့ပြီး ကထဲက .. အလုပ်လုပ်ရင်း… ပညာသင် နေခဲ့ရပြီး ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ပြန်ချင်ပေမဲ့ ပြန်မရောက်ခဲ့ ..။
အခုတော့..အလုပ်အကိုင်လဲ..အခြေကျလာပြီး..အဖေါ်လဲကောင်းတာကြောင့်..ရန်ကုန်.ပြန် လည်ဖြစ်ပြီ .. ။ သူငယ်ချင်း နိုင်လင်း က သူ နဲ့ လိုက်ခဲ့ဖို့ ခေါ်လို့လဲ ပြန်ဖြစ်တာပါ ..။ စိုးအောင် နဲ့ နိုင်လင်း ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို ရောက်တာနဲ့ သူတို့ ထွက်သွားတုံးကထက် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာတွေကို တွေ့ကြရ သည် . .။ စိုးအောင် သည် တကောင်ကြွက် .. ။ ဆွေမျိုး မရှိ ..မိဘတွေ မရှိတော့တာမို့ ဟိုတယ် … တခုမှာတည်းဖို့ လုပ် သည် . .။ နိုင်လင်းကတော့ ..မိဘ ညီအကိုမောင်နှမတွေ ရှိတော့ မိသားစု အိမ်မှာဘဲ တည်း သည် . .။
စိုးအောင် နဲ့နိုင်လင်းသည်အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်မှ..ကျောင်းတက်ရင်း.. ခင်မင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်ပေမဲ့ ..မြန်မာ နှစ်ယောက် ထဲ ရှိတဲ့ ကျောင်းမှာ စာအတူတူဖတ်..အတူတူစာကျက်ခဲ့ရာက ညီအကိုလိုဘဲ ခင်မင်လာကြသူတွေ ဖြစ်သည်။ နိုင်လင်း က သူ့မိသားစု အိမ်မှာ လိုက်တည်းဖို့ ခေါ်ပေမဲ့ စိုးအောင် လဲ ဟိုတယ်မှာဘဲ တည်းသည် ။ ဦးဝိစာရကျောက်တိုင် နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ ဟိုတယ်တခုမှာ သူ တည်းသည်။
ရန်ကုန်ရောက်တာနဲ့ ငယ်ငယ်က ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်း မိုးကြီး နဲ့ တွေ့ သည် ။ မိုးကြီး နဲ့ အမြဲ ..အီးမေးလ် အဆက်အသွယ်ရှိတာကြောင့် မိုးကြီး က လေဆိပ်မှာ လာကြိုနေသည်..။ မိုးကြီး က ကားဝယ်ရောင်း လုပ်နေသည် . .။
၀ါသနာတူတွေ ဖြစ်တာကြောင့် ရောက်တဲ့ညမှာဘဲ မိုးကြီး က စိုးအောင် နဲ့ နိုင်လင်း ကို ကာရာအိုကေဆိုင်တွေ နဲ့ အနှိပ်ခန်းတွေ ကို လိုက်ပို့ သည် .. ။ ကန်တော်ကြီး နား ကကာရာအိုကေဆိုင်ကြီးတခုမှာဘီယာသောက်ရင်း …ကောင်မလေးတွေ နဲ့ထိုင်ကြတော့..ကောင်မလေးတွေက..သူတို့ပေါင်ပေါ်ကိုတက်ထိုင်ပြီး ဖင်တွေ.. နဲ့ဖိပွတ်ကြတာကြောင့်.. နိုင်လင်းရော . .စိုးအောင်ပါ ဖီလင်တွေ တက်လာကြပြီး . .မိုးကြီး
က ဒီနေရာ က ….. အပရိကလောက်ဘဲမို့ . .မင်းတို့ ဖြုတ်ချင်ရင် တနေရာ လိုက်ပို့မယ် . .ဆိုပြီး သူတို့…ကို ဟိုတယ်အသေးစားတခုကို ခေါ်သွားသည် .. ။ အနှိပ်ခန်း ဆိုပေမဲ့ တယောက်ချင်း..အခန်းကြီးတခုထဲမှာမို့ လွတ်လပ် သည် ..။ စိုးအောင် ကို နှိပ်ပေးတဲ့ ကောင်မလေး ကလဲ..တော်တော် ဆူဖြိုးတောင့်တင်း သည် .. ။
ရင်ထွားထွား..ခါးသေးသေး.တင်ကားကား နဲ့ .။ ကာမစိတ်ကို နိုးကြွစေတဲ့ ကိုယ်လုံးပိုင်ရှင်လေး ဖြစ်သည် . .။
နံမည် က ..၀တ်ရည်. တဲ့..။ မီးမှိန်မှိန် အခန်းကြီးထဲ ၀တ်ရည် နဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ ရှိနေပြီး ၀တ်ရည် က သူမပေါင်ပေါ်သူ့ပေါင်ကို တင်ကာ နှိပ်တော့ စိုးအောင်..စိတ်တွေ နိုးကြွလာ သည် ။ပေါင်ကြားက ငပဲ က ထောင်ထလာ သည် . .။ ၀တ်ရည်ရဲ့တံတောင်ဆစ်နဲ့သူ့ငပဲ..ထိမိသွားတော့ဝတ်ရည်ကအို..ဘာကြီးတုံး..မာမာကြီး.. ဆိုပြီး..လန့်သလိုပြောလိုက်တော့ စိုးအောင်လဲ..၀တ်ရည်ရဲ့ လက်ကိုဆွဲပြီး… သူ့ငပဲပေါ်တင်ပေးလိုက်သည် .. ။ (အို . .ဒါကြီးကို နှိပ်ရမှာလား . .ကြောက်စရာကြီး . .) ( မကြောက်ပါနဲ့ ညီမရယ် . .ညောင်းလွန်းလို့ပါ . .နှိပ်ပေးစမ်းပါ . .မုံ့ဖိုးကောင်းကောင်း ပေးပါ့မယ် )
( မုံ့ဖိုး ဘယ်လောက်ပေးမှာလဲ . .)
ရန်ကုန် နဲ့ ကင်းကွာနေတာ ကြာလို့ သူ ဘယ်လောက်ပေးရမယ် မသိ .. ။ သူ..နေနေတဲ့..အမေ၇ိကန်ပြည်ကသွားနေကျ..အနှိပ်ခန်းတွေမှာဆိုရင်..ကိုရီးယားမလေးတွေ က….မုံ့ဖိုး..ကောင်းကောင်းပေးမှ ကွင်းထုပေးသည် ..။
၀တ်ရည်ကို …. .သူလဲ..၂သောင်းပေးမယ် လို့ ပြောလိုက် သည် .။
၀တ်ရည် က သူ့ဘောင်းဘီ အပေါ်ကနေ သူ့ ငပဲကို ပွတ်လိုက် ဆုတ်ကိုင်လိုက် .. လုပ်ပေး သည် . .။သူ က ခါးပတ်ကိုဖြုတ်ဇစ်ကိုဆွဲချ ပေးလိုက်တော့ ၀တ်ရည် သည် သူ့ ငပဲကို အတွင်းခံ ဘောင်းဘီထဲက နှိုက်ထုတ်ယူလိုက်လေ သည် . .။( ဟူး… အကြီးကြီး ဘဲ . .) ၀တ်ရည် က ပိုပြီး ပြောတာလား . .တကယ်ဘဲ ကြီးတယ်ထင်လို့လားမသိ ..အံ
့သြသလို ပြောရင်း . .သူ့ ငပဲကို ရှေ့နောက် ကွင်းတိုက်ပေးလေ ပြီ . .။သူကလဲ ၀တ်ရည် ရဲ့ အင်္ကျီအတွင်းကို လက်လျိုပြီုး ..ဘရာစီယာအောက်ကနေနို့တွေကို စမ်း သည် . .။ ၀တ်ရည် သည် ကွင်းတိုက်ပေးနေကျ ဖြစ်မည် . .။ တော်တော်ဘဲ ကျွမ်းကျင်တာကိုတွေ့ရ သည် ။ ( စုတ်ပေးပါလား . .)
( ဒီအတိုင်းကြီးတော့ ၀တ်ရည် မစုတ်ချင်ဘူး . .အကို့မှာ ( အဖေါ်) ပါလား . . )
( ဟင့်အင်း . .မပါဘူး . .ဒီဟိုတယ်မှာ ..ရှာလို့မရဘူးလား . .)
( ခဏ နော် အကို . .)
၀တ်ရည် ထပြီးနံရံက ခလုပ်အဖြူလေး ကို နှိပ် တော့ စားပွဲထိုးကောင်လေး ၀င်လာ သည် ။ ၀တ်ရည် က စိုးအောင်ဆီက ငွေကို ကောင်လေးကို ပေးလိုက် သည် . .။ ကောင်လေး ထွက်သွားပြီး မကြာခင်မှာဘဲ . .ကွန်ဒန် အထုပ်လေးတခု လာပေး သည် .. ။ စိုးအောင် မြန်မာပြည်က ထွက်သွားပြီးမှ ပေါ်လာတဲ့ ( အဖေါ် )ဆိုတဲ့ကွန်ဒန်..အထုပ်လေး ကို မမြင်ဘူးလို့ ယူကြည့်သည် . .။
၀တ်ရည် က ကျွမ်းကျင်စွာနဲ့ သူ့ လိင်တန်ပေါ်ကို ( အဖေါ် ) စွပ်လိုက် သည်…ပြီးတော့..စပ်ဖြဲဖြဲပုံစံနဲ့(ညီမကကျောင်းသူဘ၀က..ကျောင်းဘင်ခရာ..တီးဝိုင်းမှာ..ပါ တယ်လေ .။… .ဒီကထဲက ပုလွေမှုတ် တတ်နေတာ . .) ပြောပြီးတာနဲ့ စိုးအောင် ရဲ့..လိင်တန်ကို စုတ်ပေးလေ သည် . .။အဖေါ် ပါတာတောင် ၀တ်ရည် စုတ်တာက စိုးအောင်ကို ဖီလင်တက်စေ သည် .. ။၀တ်ရည် စုတ်ပေးနေတုံး..စိုးအောင်လဲ ၀တ်ရည် ရဲ့ နို့တွေကို ကိုင် သည် . .။စူထောင်နေတဲ့ နို့သီးလေးတွေကို သူ့ လက်ချောင်းတွေနဲ့ ခံစားနေတုံး..၀တ်ရည် သည် သူ့လိင်တန်ထိပ်ပိုင်းကို လျာ နဲ့ ရေရေလည်လည် ကစား ပေးရာ စိုးအောင် . .ပြီးသွားရ သည် . .။
၀တ်ရည် ကို သူသဘောကျသွားသည် . .။ နောက်နေ့တွေလဲ ပြန်လာအုံးမည် လို့ စိတ်ထဲမှာ စဉ်းစား လိုက် သည် . .။၀တ်ရည် က သူ့ လိင်တန်ကို သန့်စင်ပေး သည် . .။ တဖက်ခန်းမှ နိုင်လင်း နဲ့ မိုးကြီး တို့အခြေအနေကို ၀တ်ရည်က သွားကြည့်ပေး သည် .။ သူတို့ လဲ အားလုံး ပြီးစီးနေပြီ . .။
၀တ်ရည် က ဟမ်းဖုန်းလိုချင်လို့ ငွေစုနေကြောင်း သူ့ကို ပြောပြသည် . .။၀တ်ရည် ကို ဘယ်လို ဆက်သွယ်နိုင်မလဲ မေးတော့ သူမ နားရက်ကို ပြောပြပြီး သူမ နေတဲ့ အဆောင်က ဖုန်း နံပါတ် ပေး သည် . .။ ၀တ်ရည်ကို သူငွေနှစ်သောင်းထပ်ပေးလိုက်သည် . .. ။
နိုင်လင်းနဲ့ မိုးကြီးက သူ့ ကို သူနေတဲ့ ဟိုတယ်လ်ကို ပြန်ပို့ သည်
..။ရန်ကုန်ေ၇ာက်ရောက်ချင်းဘဲ ..ထွက်ကဲကြတဲ့ သူတို့ လုပ်ရပ်ကို သူစဉ်းစားပြီး သဘောကျနေသည် ။
နောက်တနေ့ မှာ မနက်ပိုင်း ..ဟိုတယ်လ် အောက်ထပ်ဆင်းပြီး ဟိုတယ်လ်က ကျွေးတဲ့ ဘရိတ်ဖတ်စ် . .စား သည် .. ။ မြန်မာပြည်က ဟိုတယ်လ်က ဘရိတ်ဖတ်စ်
သည် တခြားတိုင်းပြည်တွေထက်သာသည် . .။ ကြာဇံကြော်ရော..ဘဲဥ ဆားစိမ်ရော . စုံနေသည် . .။ ခဏကြာတော့ . .သူ့ကို မိုးကြီး ကားနဲ့ လာခေါ်သည် . .။ လူကြုံ ပေးလိုက်တာတွေ ရန်ကုန်မြို့အနှံ့လိုက်ပေး သည် . .။ မိုးကြီး က ( ဘယ်လိုလဲ . .သူငယ်ချင်း . .ညက ပျော်ရဲ့လား . .) လို့မေး သည် .. ။ ( ပျော်တာပေါ့ သူငယ်ချင်း . .ငါထွက်သွားတုံးက ..ဒါတွေ မရှိသေးဘူး . .) လို့ ပြန်ဖြေရသည် . .။
မိုးကြီး ငှားပေးထားသော ဟမ်းဖုန်းမြည်လာ သည် . .။ သူ့ကို ဆက်မဲ့ လူဆိုလို့ နိုင်လင်း ဘဲ ၇ှိသည် . . ။ ဒီနံပါတ်ကို သိတဲ့လူလဲ နိုင်လင်း ဘဲ ရှိ သည် . .။ ( ဟေး..ပြော . .သူငယ်ချင်း .. )
(ကိုစိုးအောင် . .ဘယ်ရောက်နေလဲ . .)
( လူကြုံ အထုပ်တွေနဲ့ ငွေတွေ လိုက်ပေးနေတာ . . ကျနော့်အကို ၀မ်းကွဲနဲ့. .ခင်ဗျားကော ဘယ်မှာလဲ . .)
( ကျနော်လဲ ခင်ဗျားလိုဘဲပေါ့ . .ပေးလိုက်တာတွေ လိုက်ပို့နေတာ . .ခင်ဗျားနဲ့ ကိုမိုးကြီးလား…)
( ဟုတ်တယ်. .)
( နေ့လည်စာ ဘယ်မှာ စားမလဲ . .ဆုံကြမလား . .)
( ဆုံလေ . .ဘာစားချင်လဲ . .)
( ကျနော် ကတော့ ကြေးအိုးလောက်ဘဲ ဗျာ . .သိပ် ဟဲဗီးတော့ မစားချင်ဘူး . .) ( ကောင်းပြီလေ . .ရန်ကင်းကြေးအိုးဆိုင်မှာ ဆုံကြတာပေါ့ . .)
စိုးအောင် နဲ့ နိုင်လင်း တို့ တွေ့ကြသောအခါ ..နိုင်လင်းက..တခြားလုပ်စရာ.. အရေးကြီးတာ မ၇ှိရင် ..သူနဲ့ ညစာ လိုက်စားဖို့ ခေါ် သည် .. ။ နိုင်လင်းရဲ့ မိသားစုက စိုးအောင် နဲ့ နိုင်လင်း ယူအက်စ်အေ မှာ ရင်းရင်းနှီးနှီး ပေါင်းကြတာကို သိနေတာ ကြာပြီ ဆိုတော့..စိုးအောင် နဲ့ ဆုံချင်ကြသည် . .။ လိုက်ခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်သည် . .။ မိုးကြီးကတော့ သူ့ မိသားစု ကိစ္စတွေ ပြေးလုပ်လိုက်အုံးမည် ဆိုပြီး မလိုက် . .။ နိုင်လင်း ရဲ့ မိဘတွေက ဘောက်ထော် ဘက်မှာ နေသည် .. ။စိုးအောင် အရင်က ဘောက်ထော်ဘက် ခဏ ခဏ ရောက်ဘူးပေမဲ့ နိုင်လင်း မိဘတွေ ရဲ့ အိမ် ကိုလဲေ၇ာက်ရော ..ဖြုန်သွား သည် . .။ မြန်မာ ဗွီဒီယို ရုပ်ရှင်တွေမှာ တွေ့ဘူးသည့် ကြီးမား လှပသော ယနေ့ခောတ်မှ ဆောက်သည့် ပုံစံသစ် တိုက်ကြီး နဲ့ ခြံဝင်းကျယ်ကျယ်ကြီး
ဖြစ်သည် ။ နဲနဲနောနော ကြီးတဲ့ အိမ်ကြီး မဟုတ်ဘူး …။ နိုင်လင်း မိဘတွေက ၀မ်းသာအားရ ကြိုဆိုကြ သည် . .။ မိသားစု တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေး သည် .. ။ စိုးအောင် ကို နိုင်လင်း အဖေက သူ့ တူတူမတွေ နဲ့ မိတ်ဆက်ပေး နေတဲ့အခါ..စိုးအောင်စိတ်ထဲမှာအကြီးအကျယ်တုန်လှုပ်သွားစေတာကတော့..နိုင်လင်း ရဲ့ ညီအကိုတ၀မ်းကွဲ . .စိုးလင်း ရဲ့ မိန်းမ ဆိုတဲ့ ဂျုံဂျုံ ကြောင့်ပါဘဲ . .။ မထင်မမှတ်တာတွေပါလား . .။ ဂျုံဂျုံ ဆိုတဲ့ မိန်းမ …။ ဟာ..နိုင်လင်း ကာဆင်၇ဲ့ မိန်းမ ဆိုပါလား . .။ လူတူလို့များလား..။ မဖြစ်နိုင်ဘူး . .။ သူ မှ သူ အစစ် ..။ နိုင်လင်း အဖေက…( ဒါက ..အန်ကယ့်တူ . .စိုးလင်း . .နိုင်ငံခြားသင်္ဘော မှာ အင်ဂျင်နီယာချုပ်ပေါ့ . .ဒါက..စိုးလင်းရဲ့ ဇနီး ..ဂျုံဂျုံ . .အဲ . .ဒေါက်တာ Joan Aung Khin ပေါ့ . .မကြာခင်ကဘဲ ယူအက်စ် မှာ ကျောင်းသွားတက်ပြီး ပြန်လာတာ ..ဂျုံဂျုံ..ဒါ နိုင်လင်းရဲ့ ဘက်စ်ဖရင်း ..စိုးအောင် တဲ့ . .) လို့ မိတ်ဆက် ပေးသောအခါ စိုးအောင် သည် ဂျုံဂျုံ (သို့ ) Joan Aung Khin ကို အံ့ သြတုန်လှုပ်စွာ နဲ့ ….ကြည့်နေမိပြီး . .. .စိတ်တွေ တအား.. လှုပ်ရှားနေလေ သည် . .။သူနဲ့ ( အပြာရောင်သစ်ခွ နိုက်ကလပ် ) မှာ ဆုံခဲ့ပြီး..ဟိုတယ်ခန်းမှာ ပွဲကြမ်းခဲ့သော စီလီယာ ဆိုတဲ့ မိန်းကလေး သည် ဂျုံးအောင်ခင် အဖြစ် ပြန်တွေ့နေရသည် . .။
သူထင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဘဲ . .စီလီယာ လို့ သူ့ကို ညာသွားတဲ့ ဂျုံဂျုံ သည် ဆရာဝန် မတယောက် ဖြစ်နေပါ သည် .. ။
ဂျုံဂျုံ ရဲ့ ယောင်္ကျာ .း.နိုင်လင်း ရဲ့ ကာဆင် စိုးလင်း က ..( ဂျုံဂျုံ က (….) မြို့ က ( ….) ယူနီဗာစီတီ မှာ ဘွဲ့လွန် တက်တာလေ . .ကိုစိုးအောင်တို့ နိုင်လင်းတို့နေတဲ့ မြို့နဲ့တော့ ..မနီးလှဘူး . ..) လို့ ၀င်ပြော သည် . .။ နိုင်လင်း က ..( ကျနော်နဲ့ ဂျုံဂျုံ ကတော့ ဖုန်းနဲ့တော့ ခဏခဏ စကားပြောဖြစ်ခဲ့ တယ် . .) လို့ စိုးအောင် ကို ပြောသည် ။ ဂျုံဂျုံ ကတော့ စိုးအောင်လိုဘဲ . နုတ်ဆိတ်နေသည် . .။ မျက်လွှာချပြီး သူမ လဲ စိုးအောင် နဲ့ တွေ့ရတာ …တုန်လှုပ်နေသလိုဘဲ . .။
နိုင်လင်းအမေရောက်လာပြီး..အားလုံး..အစားအသောက်..လာစားကြဖို့ခေါ်လို့..စကားပြတ် သွားကြသည် ။
နိုင်လင်းရဲ့ အမေ ထည့်ပေးနေတဲ့ ဟင်းတွေကို ပုဂံပြားထိုးခံပြီး
လက်ခံယူနေရပေမဲ့ . .စိုးအောင်ရဲ့ စိတ်တွေ က ဂျုံဂျုံ ဆီကို ရောက်နေ သည် . .။ ဂျုံဂျုံ ဆိုတဲ့ မိန်းမ အကြောင်း ကို စဉ်းစားနေ သည် . .။
ဂျုံဂျုံ နဲ့ သူ ဆုံခဲ့ဘူး သည် . .။ ပတ်သက်ခဲ့ဘူး သည် . .။သို့ပေမဲ့
သူ သည် ဂျုံဂျုံ ကို ဂျုံဂျုံ ဆိုတဲ့ နံမည် …Joan Aung Khin ဆိုတဲ့ နံမည်နဲ့ သိခဲ့ ဆုံခဲ့ ပတ်သက်ခဲ့တာ တော့ မဟုတ် .. ။
ဂျုံဂျုံနဲ့ဒီနေရာမှာဒီလိုပုံစံနဲ့ပြန်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့..လုံးဝမမျှော်လင့်ထားခဲ့ပေ . .။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆လလောက်က ဖြစ်သည် . .။ စိုးအောင် သည် သူ့အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး..သင်တန်းတခု ကို တခြားမြို့မှာ သွားတက်ရသည် ..။ ရုံးစားရိတ်နဲ့ ဘဲ .. တည်းဖို့ ဟိုတယ်ခ . .နေ့စဉ် စားစရိတ်တွေ ရ သည် . .။ လေယာဉ်ခ ရောပေါ့ . .။ အရင်ကလဲဒီလိုဘဲသင်တန်း…..သွားတက်ရတာတို့..အစည်းအဝေး….သွားတက်ရတာတို့.. တခြားမြို့ကို စိုးအောင် သွားရတတ် သည် ..။
လေဆိပ်က နေ ဟိုတယ်လ်ဆီ ကို တက်ကစီ နဲ့ အသွား လမ်းမှာ မီးပွိုင့်မှာ မီးနီမိနေတုံး..( အပြာရောင်သစ်ခွ )ဆိုတဲ့ နိုက်ကလပ်တခုကို သူ သတိပြုမိသည် . .။ သင်တန်းတွေ တက်ပြီး သူ့မြို့ မပြန်ခင် တည အချိန်ရသေးလို့ . .ဒီ..နိုက်ကလပ် ကို လာကြည့်အုံးမယ် လို့ စိတ်ထဲ မှတ်သားစဉ်းစားထားလိုက် သည် . .။
သင်တန်းတွေ ပြီးဆုံးတဲ့ ညမှာ ..သူတွေ့ခဲ့တဲ့(အပြာရောင်သစ်ခွနိုက်ကလပ် )ကို သူ သွားသည် . .။ သည်နိုက်ကလပ်သည် သူနေသော မြို့ က ကလပ်တွေလို လူတွေ တိုးမပေါက်အောင် ပြည့်ကျပ် နေခြင်းမရှိ .. ။လူကျဲသည် . .။
ဘားကောင်တာမှာ လူပြည့်နေတာနဲ့ အစွန်ကျတဲ့ စားပွဲတလုံးမှာ သူ ထိုင်သည် ။စကပ်တိုတိုလေး သတ်ထားတဲ့ စားပွဲထိုးမလေး သူ့ကို ဘာမှာမလဲ လာမေးသည် ။သူကသိပ်အပြင်းစားသောက်တတ်သူမဟုတ် . .ကိုရိုနာ…အိပ်စ်ထရာ..ဘီယာ မှာသည် . .။ မာလ်ဘိုရို စီးကရက်ဘူးထဲက စီးကရက်တလိပ်ကို ထုတ်ခါ မီးညှိလိုက်သည် ..။ အဆိုတော် ရှက်ဂီ ရဲ့ အိမ်ဂျယ်လ် ဆိုတဲ့ သီချင်းကိုဒီနိုက်ကလပ်က ..လူမဲမအဆိုတော် က ဆိုနေသည် .
။.စားပွဲထိုးမလေး.သံပုရာသီးစိပ်လေးပုလင်းဝမှာစွပ်ပေးထားတဲ့..ကိုရိုနာဘီယာပုလင်းလာချ သည် . .။ သံပုရာသီးစိပ်လေးကို ကောက်ယူကာ ပုလင်းထဲညှစ်ထည့်ပြီး ..သံပုရာနံ့ လေးသင်းနေတဲ့ ဘီယာကို ပုလင်းလိုက် မော့သည် . .မာလ်ဘိုရိုကို…ရှိုက်ခါသောက်သည် ။အိန်ဂျယ်သီချင်း ရဲ့ ရက်ပ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကို လူမဲကောင်လေးတယောက် ကကုန်းကွကွ နဲ့..ဆိုနေတာကို သူ သဘောကျစွာ ကြည့်နေတုံး . .( မီးခြစ် ခဏ သုံးလို့ရမလား . .)လို့ မေးလိုက်တဲ့…အသံလေးကြောင့်..သူလှည့်ကြည့်တော့….ဆံပင်..နက်နက်တိုတို…အသား
ဖွေးဖွေး နဲ့ အာရှသူ ကောင်မလေးတယောက် . .လက်ထဲမှာလဲ စီးကရက် ကိုင်ထား သည် . .။မီးခြစ်ကို လှမ်းပေးတော့ ..ကောင်မလေး ဖြူသွယ်တဲ့ လက်ကလေးနဲ့ လှမ်းယူပြီး မီးညှိနေတာ သူ အမှတ်မထင် ကြည့်မိသည် .. ။
( သိုင့် အလော့တ် . .)
စီးကရက်ကို ရှိုက်ဖွါရင်း ကောင်မလေး . .သူ့စားပွဲနဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့စားပွဲကို..ပြန်သွားသည် ။ကောင်မလေးရဲ့ နောက်ပိုင်းကို သူ ကြည့်မိရင်း .ပစ္စည်းကောင်းသားဘဲ လို့ မှတ်ချက်ချမိသည် ။
သူ ဘီယာတလုံးကုန်လို့ စားပွဲထိုးကောင်မလေး ကို နောက်တလုံး
ထပ်မှာချိန်မှာ..စောစောက မီးခြစ်လာငှားသုံးတဲ့ အာရှမလေးလဲ နောက်ထပ် ယမကာ ဖန်ခွက်တခွက် ထပ်မှာနေတာ တွေ့ရသည် ..။ သူမ ဘာသောက်တာလဲ … သိချင်..စပ်စုချင်လာ သည် ..။သူ့အတွက်ဘီယာ လာချပေးတော့ စားပွဲထိုးအဖြူမလေး ကို ဘောက်ဆူး ( Tip) ပေးပြီး..ဟိုဘက်စားပွဲက ကောင်မလေး..ဘာသောက်လဲ စပ်စုလိုက် သည် . .။ စားပွဲထိုးကောင်မလေး က ..( ဖါးရားဖလိုင်း Fire Fly…ဗော့ဂါ ) လို့ဖြေသည် .သူ..စီးကရက်နောက်တလိပ်..ထုတ်သောက်ချိန်..အာရှမလေးသူ့စားပွဲကို..လျောက်လာပြန် သည် ။
( မီးခြစ်လိုလို့လား . .ဒီမှာ . .)
သူမဘက်ကို မီးခြစ် တွန်းရွေ့ပေးလိုက်တော့ ..ကောင်မလေးသည် ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ..( ဒီတခါတော့ . .စီးကရက်ပါ တောင်းမလို့ ..ငါ့မှာ ကုန်သွားပြီ . .တဘူးလုံးလဲ… ထပ်မ၀ယ်ချင်တော့ဘူး . .ရှိနေရင် သောက်မိလွန်းလို့ . .)လို့ သူ့ကို ပြောသည် ..။ သူလဲ ကောင်မလေးရဲ့ လေယူလေသိမ်း ကို အကဲဖမ်းကြည့်လိုက်သည် . .။ ဘယ်နိုင်ငံသားဖြစ်မလဲဆိုတာ ။ ဖိလိပီနိုလား . .။ ဗီယက်နမ်လား . .။ ထိုင်းလား . .။ ကမ္ဘောဒီးယားလား . .။
သူ စီးကရက်ဘူး ကို ကမ်းပေးလိုက်သည် . .။
( သိုင့်စ်အလော့တ် …ယူက ဖိလိပီနိုး ဆိုတာ ယူ ၀င်လာကထဲက သိတယ် . .ငါ့မှာ ဖိလိပီနို သူငယ်ချင်းတွေ ရှိတယ် . .) လို့ြေ့ပာပြန်သည် .. ။ စိုးအောင်လဲ ထင်ချင်ရာ ထင်ပစေတော့..။ မြန်မာ ဆိုတာလဲ ရှင်းပြမနေတော့ ..။ နိုက်ကလပ်မှာ တွေ့တဲ့ မိန်းကလေးတယောက် သည် လမ်းမှာ တွေ့တဲ့ သစ်ပင်တပင်လိုဘဲ ခုတွေ့ ..တော်ကြာ မေ့သွားမှာဘဲဆိုပြီး..သူ ခံယူလို့ပါ . .။
( မင်းက ဘယ်ကလဲ ..)
( ဘာကိုမေးတာလဲ . .နိုင်ငံလား . .)
( ဘယ်နိုင်ငံက လဲ မေးတာပါ . .)
( ဘန်ကောက် က လာခဲ့တာ . .ငါ့နံမည် က စီလီယာ celia . .)
အော်..ထိုင်းမလေးကိုး . .။
စားပွဲထိုးမလေး က စီလီယာ celia ဆိုတဲ့ ဘန်ကောက်သူလေး ရဲ့ ယမကာခွက် ကို သူမ ကစိုးအောင်နဲ့ လာထိုင်စီးကရက်သောက်နေတာနဲ့ ..ဒီမှာဘဲ ထိုင်တော့မယ်ထင်ပြီး ..စိုးအောင်စားပွဲမှာဘဲ လာချထားပေးလေ သည် . .။ ကောင်မလေးလဲ..( မထူးပါဘူး . .ဒီမှာဘဲ ထိုင်လိုက်တော့မယ် . .ဖြစ်တယ်မဟုတ်လား . .လို့..သူ့ကိုမေးသည် . .။
( အို..ဖြစ်တာပေါ့ …ငါလဲ တယောက်ထဲဘဲ . .မင်း လာထိုင်ရင်..စကားပြောဖေါ်.. တောင်ရသေးတယ်..ထိုင်ပါ . .) လို့ပြန်ပြောလိုက် သည် . .။
စီလီယာ သည် စိုးအောင်ကို ဖိလိပီနို ထင်နေသည် . .။ သူမ ဖခင် အလုပ်တာဝန်နဲ့ ဖိလိပိုင်နိုင်ငံ မှာနေဘူးတာကြောင့်ငယ်ငယ်က မနီလာမြို့မှာ နေဘူးကြောင်း တွေ … ပြောပြသည်..။စိုးအောင်ကလဲ သူ ဘန်ကောက်မြို့ကို ငယ်ငယ် က မြ၀တီဘက်ကနေပြီး ခိုးဝင်ကာ ရောက်ဖူးတဲ့အကြောင်း ..စီလီယာကို ပြောပြသည် . .။
စိုးအောင်က ဘီယာ တလုံးပြီးတလုံး …စီလီယာက ဖါးယားဖလိုင်း တခွက်ပြီးတခွက် သောက်ကြပြီး စီးကရက်ကလဲ ဘူးသစ်တဘူးဖေါက်ထားတာတောင် …တ၀က်လောက်ကျိုးပြီ . ..။ ( အခု ဒီမြို့မှာ ဟိုတယ်လ်မှာနေတာလား . . .)
( ဟုတ်တယ်..စီလီယာ ..ဟိုတယ်လ်မှာ . .)
( ငါကတော့ (….) ယူနီဗာစီတီ က ကျောင်းဆောင်မှာနေတယ် . .) ( အော်..ဒါဖြင့် စီလီယာ က ကျောင်းသူပေါ့ …)
( ဘွဲ့လွန်..တခု လာတက်တယ် ဆိုပါတော့ . .)
(အိုး..ကောင်းလိုက်တာ . .)
( ယူ ဘိုက်ဆာလား . .ဒါနဲ့ ယူ့နံမည်က . .)
စီလီယာက သူ့ကို ဖိလိပီနို ထင်နေလို့ သူ လဲ ဆက်ပြီး အရှိန်နဲ့ လှိမ့်မယ်ဆိုပြီး . .ပါးစပ်ထဲရှိရာ နံမည် . .ပြောလိုက်ပါ သည် .. ။
( အဲလက်စ် . .ငါ့နံမည် ..အဲလက်စ် .. .Alex…)
( အဲလက်စ် . .ဒီမြို့ က ညလုံးပေါက် ဖွင့်တဲ့ ဗီယက်နမ် ဆိုင် စား ဘူးလား . .) ( ဟင့်အင်း . .ငါက ဒီမြို့မှာ ဧည့်သည် ဘဲလေ . .မစားဘူးဘူး . .)
( သွားကြမလား….စီလီယာလဲ ဆာသလိုလို ရှိလို့ . .)
( ကောင်းသားဘဲ..စီလီယာ..ဒို့၂ယောက် ဒီမှာ ထိုင်တာလဲ ကြာနေပြီ . .) သန်းကောင်ရဲ့တခြားတဖက်မှာစိုးအောင်နဲ့စီလီယာတို့…ရေချိန်ကိုက်နေကြပြီး..အြ့ပာရောင် သစ်ခွ ကလပ်ထဲက ထွက်ခဲ့ကြသည် . .။
စီလီယာ က အငှားကား . .တား သည် . .။ စီလီယာက ဘဲ ကားသမားကို သွားလိုတဲ့ နေရာကို ပြော သည် ..။ စီလီယာ လဲ တော်တော် မူးနေပုံရသည် ..။ ညလုံးပေါက်ဆိုင်ကို ရောက်တော့ ..သူတို့လိုဘဲ သန်းကောင်ယံ စားသောက်တဲ့ လူတွေ ရှိနေသည် ။များသောအားဖြင့် စုံတွဲများ ဖြစ်သည် . .။
သူတို့၂ယောက် ကို လူတွေ လှည့်ကြည့် သည် .. ။ အာရှသားစုံတွဲ ဖြစ်နေပြီး တယောက်နဲ့ တယောက် အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ ပြောဆိုနေကြတာကြောင့် ဖြစ်မည် …။၀က်သဲ..၀က်နားရွက်နဲ့ဝက်ပေါင်ခြောက် ပါတဲ့ ဗီယက်နမ် Sandwich နဲ့ .. ဖို PHO အမဲသား စွပ်ပြုတ် မှာ သည် ..။
စိုးအောင်က..( ထပ်သောက်အုံးမလား . .ဒီမှာတော့ ဘီယာဘဲ ရမယ်
. . .)လို့မေးတော့ စီလီယာ က သူမ များနေပြီ . .တမျိုးထဲ မသောက်ဘဲေ၇ာမိရင် လဲ နေမကောင်း ဖြစ်မည် . . လို့ ပြောသည် . .။
သူတို့ ဆင်းဒ၀စ်ခ်ျ စား ..အပြုတ်သောက်ကြသည် . .။ စိုးအောင် သည် စီလီယာ ပြောတာ ကို စဉ်းစားနေသည် . ။ သူမ ပြောသော တက္ကသိုလ် သည် ဆေးတက္ကသိုလ် တခုဖြစ်သည် . .။ သူမ က ဘွဲ့လွန်တက်နေသည်ဆိုလျှင် သူမသည် ..ဆရာဝန်တယောက် ဖြစ်မည်..။
ပြန်ကြဖို့ ဆိုင်ထဲက ထွက်တော့ ..စိုးအောင် က ..( စီလီယာ..မင်းကို ငါ… မင်းနေတဲ့နေရာ လိုက်ပို့မယ်..ပြီးမှ ပြန်မယ် . .) လို့ ပြောတော့ သူမ က ..( ဒီအချိန်မှတော့ မပြန် ချင်တော့ဘူး . .ငါ့ အခန်းဖေါ် (ROOM MATE ) ကို တံခါးခေါက်ပြီး မနှိုးချင်တော့ဘူး ..ငါ ပန်းခြံထဲမှာဘဲထိုင်နေတော့မယ်. . )လို့ပြောသည် . .။
( ရာသီဥတု က အေးတယ် . .ဒါဆို မင်း..ငါ့ ဟိုတယ်ခန်းမှာ လိုက်အိပ်ပါလား . .) ( အင်း..ကောင်းသားဘဲ . .ငါ . .ဧည့်ခန်း က ဆိုဖါမှာ အိပ်နိုင်ပါတယ် . .)
စီလီယာ သည် စိုးအောင် နဲ့ ဟိုတယ်လ်ခန်း ကို ပါလာ သည် .. ။ သူမ ကို ကြည့်၇တာ အရက်ကလဲ မူး..အိပ်ကလဲ အိပ်ချင်နေသည် ..။ စိုးပောင် ကို တွဲမှီ ထား သည် . .။ ဟိုတယ်လ်အခန်း ကို ရောက်တော့ . .စိုးအောင် က ..( စီလီယာ ရေချိုးချင်ချိုးပါလား .. ရေချိုးလိုက်ရင် လန်းသွားမယ် . .) လို့ ပြောတော့ . .( အိုကေ . .) ဆိုပြီး ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်သွား သည် ..။ ရေပန်းဖွင့်သံ ကြားရ သည် .. ။
စိုးအောင် လဲ စီလီယာ ချိုးပြီးရင် သူလဲ ချိုးမယ်ဆိုပြီး စောင့်နေသည် .. ။ သို့ပေမဲ့ စီလီယာ ရေချိုးနေတာ တော်တော်ကြာသည် .. ။ သူ စောင့်နေသည် . .။ အို . .တဖြေးဖြေး နဲ့ ကြာလာ သည် .. ။ သူ တံခါးကိုခေါက်ပြီး ခေါ်ကြည့် သည် . .။ စီလီယာ မထူး . .။အသံ လဲ ရေကျသံကလွဲလို့ ဘာမှ မကြားရ ..။ တခုခုတော့ ဖြစ်နေပြီလား ။ စိတ် အရမ်းပူလာသည် ..။ သူ အထဲ ၀င်ကြည့်လိုက်သည် . . ။ ( အို . .)
အ၀တ်မပါ ဗလာ ကိုယ်နဲ့ ….စီလီယာသည် ရေချိုးကန်ထဲမှာ နံရံကို
ခေါင်းလေးမှီပြီးခွေခွေလေး ဖြစ်နေသည် ..။
( စီလီယာ…စီလီယာ . . .. .)
ခေါ်လို့လဲ မရ . .။ စီလီယာ ရဲ့ အ၀တ်မဲ့ ကိုယ်ခန္ဒာအလှ ကို သူ သတိမပြုမိအားသေး . .။ စီလီယာကို ပွေ့ချီကာ အပြင်က ကုတင်ကြီးပေါ်ကို ခေါ်ထုတ်ခဲ့သည် . .။ ပက်လက်ကလေးအိပ်ပျော်နေတဲ့စီလီယာကိုဆံပင်ကစပြီးသူ..မျက်နှာသုတ်ပုဝါကြီးတထည် နဲ့ ရေသုတ်ပေးသည် . .။ဆံပင်..မျက်နှာ..လည်တိုင်..ပုခုံး..ရင်ညွန့် ကနေ တင်းမာပြီး ထိပ်ဖျားနားမှာ ခပ်ကော့ကော့လေး ဖြစ်နေသော သူမ ရဲ့ ရင်သား လှလှတွေ ဆီ သုတ်ပေးတော့..စိုးအောင်၇ဲ့ တကိုယ်လူံးရှိန်းဖိန်းလာပြီးလက်တွေလဲ…တုန်ရင်လာရသည်..။ ရင်သားနှစ်မွှာ သည် အရမ်းလဲ မကြီး .. သေးလဲမသေး..။ အနေတော် ဆိုက် ..။ လုံးသန်းပြီး တင်းနေသည် . .။လှလိုက်တာ စီလီယာရယ် . .. ။
ရင်သားထိပ်နို့သီးလေးတွေ က အသားဖွေးနုလွန်းတာကြောင့် ပန်းနုရောင်လေးတွေ ..။ ငုံ့ပြီး စုတ်ချက်..စို့ချင်စိတ်ပေါက်၇တာကို မနဲ စိတ်ထိန်း ကာ ရေဆက်သုတ်ပေးသည် .. ။ ၀မ်းဘိုက်ရှပ်ရှပ်လေးကနေ အောက်ဖက်ရောက်လာတော့ ပေါင်တန်ဖြူဖြူသွယ်သွယ်တွေ နဲ့ပေါင်ကြားဂွဆုံ က မို့ဖေါင်းတဲ့ အမွေးပါးပါး နဲ့ အင်္ဂါစပ်ခုံးခုံးကြီး ကို မြင်လိုက်ရတာနဲ့ သူ့ပေါင်ကြား က ဖွါးဖက်တော် လိင်တန်ကြီး သည် အရမ်းကို တောင်မတ်လာရပေ သည် . .။အင်္ဂါစပ်ကြီးသည် ဖေါင်းမို့နေသည် . .။ ( စောက်ဖုတ်မုံ့ပေါင်း..လိုးလို့ကောင်း . .)
ဆိုတာ..ဒါမျိုးဘဲ ဖြစ်မည် လို့ စိုးအောင် တွေးနေ သည် . .။
အင်္ဂါစပ်ကြီးကိုရေသုတ်ပေးတော့ . .စိုးအောင် စိတ်တွေ မထိန်းနိုင်တော့ပေ။ သူ့ နှာခေါင်းနဲ့ နမ်းရှုံ့လိုက်မိရ သည် . .။ စီလီယာ အင်း ..အင်း..ဆိုပြီး လူးလွန့်လာ သည် ။ နမ်းမိ လိုက်တော့လဲ ဆက်ပြီး နမ်းချင်ရသည် .. ။ ထိပ်နားက အစိလေးကို နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ ငုံစုတ်မိရသည် . .။ သူ့လျာက အလိုလို အကွဲကြောင်းတလျောက် ..အောက်ကနေပင့်ပင့်ပြီး ယက်မိသည် . .။စီလီယာ..ဟင့်ဟင့် ဆိုပြီး လူးလွန့် ကာ … မျက်လုံးဖတ်ကနဲ ပွင့်လာ သည် . .။ စိုးအောင်လဲ ဆက်ယက်နေမိသည် . .။ စီလီယာ သူ့ကို ကြည့်နေသည် . .။ ( အို..အဲလက်စ် . .. ဘာ..ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ . .. အင်…ယူ စောက်ပတ်ကို ယက်နေပါလား . .)
စိုးအောင် သည် ဆက်ပြီးယက်နေသည် . .။ စီလီယာ မျက်စိလေး မှိတ်သွားပြန်ပြီး . .သူမ ပေါင်တွေကို ကားပေးသည် . .။ ( ယူ သိပ် လုပ်တတ်တာဘဲ ..ယူ တော်တော် လုပ်တတ်တယ် …)
စိုအောင်လဲစီလီယာမငြင်းဘဲကောင်းသည်..ပြောနေတာကြောင့်အားတက်သွားပြီး..တတ်သ ည့်ပညာမနေသာဆိုသလို..စီလီယာ့ကိုကောင်းစေလိုတဲ့စေတနာ..အပြည့်နဲ့..သူ့လျာကိုအ င်္ဂါစပ်အတွင်းထဲကို ရနိုင်သမျှ ထိုးသွင်းသည် . .။
စီလီယာ့ ညည်းသံတွေ ပိုကျယ်လာ သည် . .
(အို…အို….အို…အင်….အင်……အင်….အင်…အာ . .. .. .)
သည်အချိန်မှာစိုးအောင်ရဲ့လိင်တန်ကြီးဟာ..တအားတောင်မတ်နေပြီး..ခုချက်ချင်းဘဲ..သူမအ ထဲကို ထိုးသွင်းကာ စပ်ရှက်လိုက်ပစ်ချင်နေပြီ . .။ ကာမစိတ်တွေ အရမ်း ပြင်းထန်နေပြီ . .။စီလီယာလဲ သူ့လိုဘဲ ဖြစ်ဟန်တူ သည် .. ။
( အဲလက်စ် . . .တော်ပြီ. .ရပ်ပါတော့ . .) လို့ ပြောသည် ။
စိုးအောင်လဲ အင်္ဂါစပ် ကို သဲသဲမဲမဲ ယက်ပေးနေရာ က ခေါင်းမော့ကာ ကြည့်လိုက်သည် ။ ( အရမ်းလိုချင်နေပြီ . .. လုပ်ပါတော့ . .)
စိုးအောင်လဲ သူ့ ဘောင်းဘီကို ချွတ်လိုက်သည် . .။ အညိုရောင်..လိင်တန်တုတ်တုတ်ကြီး မားမားမတ်မတ်ပေါ်ထွက်လာ သည် ..။ စီလီယာ သည် လိင်တန်ကို စိုက်ကြည့်နေသည်။ ကားထားတဲ့ စီလီယာ့ပေါင်တန်တွေကြားသူဝင်ရပ်လိုက်သည် . .။လိင်တန်ခေင်းကို သူမ..အင်္ဂါစပ်ပေါက်မှာတေ့ကာထိုးသွင်းတော့မျက်စိလေးမှိတ်ခါ…အင်လိုလို…ဟင်လိုလို… ညည်းသံလေး ကြားလိုက်ရပြီးသူမ ခြေထောက်တွေ ကို မိုးပေါ်ထောင်လိုက်တာကို
သတိထားမိသည် . .။ သူ့ လိင်တန်တုတ်တုတ်ကြီး တင်းတင်းကြီး ..တိုးဝင်သွားသည် . .။ သူမ အင်္ဂါအတွင်းက နံရံတွေကို ပွတ်တိုင်ခါ တိုးဝင်သွားသည် ။
တဆုံးမသွင်းဘဲ..တ၀က်လောက်သွင်းမိတာနဲ့ ပြန်နုတ်ပြီးတခါထပ်သွင်း သည် . .။သူ့ပါးစပ် က သူမ ရင်သားတဖက်ကို လှမ်းစို့လိုက်သည် . .။လျာနဲ့ နို့သီးကို ကလိပေးမိသည် ..။ ( အိုး..ကောင်းတယ် . .လုပ်ပါ . .ငါကြိုက်တယ် . .) တဲ့ . .။
ရင်သားတွေကို..တဖက်ပြီး..တဖက်စို့ပေးလိုက်…..လျာနဲ့ကလိပေးလိုက်…လုပ်ပေးရင်း…ထိုး ညှောင့်ပေးနေပြီ . ..။သည်မိန်းမ ကာမစိတ်တွေ အရမ်းကြွနေပြီး လိင်ဆက်ဆံချင်နေတာ ကြာပြီ ထင်ပါရဲ့ . .။ သူလုပ်တာတွေကို သဘောကျပုံရသလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလဲ ကြိုက်တဲ့အကြောင်း ပြောသည် .. ။
ခပ်သွက်သွက် ဆောင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာနဲ့ စိုးအောင်လဲ မြန်လာသည် . .။ အားပါလာ သည် . .။ ဆောင့်ချက်တွေ စိပ်လာ သည် .. ။ စီလီယာ သည် အတွေ့အကြုံ ရှိတဲ့ မိန်းမ ဖြစ်ကြောင်း သူမ အောက်မှ တုန့်ပြန်ချက်တွေက ဖေါ်ပြနေသည် . .။ အောက်က ပင့်ပင့်ပေးနေသည် ။
စီလီယာ သည် အောက်ပေး တော်တော်ကောင်း သည် ..။
( အို….မြန်မြန်..မြန်မြန်. . ..)
စိုးအောင်လဲ သူမ ကောင်းနေလို့ မြန်မြန် ဆောင့်ခိုင်းနေလို့ ..အားကုန် ကိုင်တော့သည် . .။တဖန်းဖန်းနဲ့ ဆီးခုံချင်းရိုက်ခတ်သံတွေက ကျယ်လောင်လှ သည် .. ။ ကုတင်ကြီး တကျွိကျွိ ..နဲ့ ယမ်းခါနေသည် . .။စိုးအောင်ရဲ့ အင်း….အင်း..နဲ့ အားယူသံတွေ..သူမ၇ဲ့ အို..ရဲ..အို..ရဲ…ဆိုတဲ့ အသံတွေ ညံနေသည် . .။
အသားကုန်ဆောင့်ပစ်လိုက်တာ သူမကော သူကော ..ပြိုင်တူ..ပြီးသွားကြသည် . .။ သူမပြီးကြောင်း . .သိသိသာသာ တွေ့ရ သည် . .။စိုးအောင်၇ဲ့ လက်မောင်းသားတွေကို တအားကုတ်ခြစ်ပြီး..မျက်လုံးစုံမှိတ်ခါ တအီးအီးညည်းရင်းကော့တက်သွားသည် . .။ စီလီယာ နဲ့ စိုးအောင် ဘေးချင်းယှဉ်ကာ ပက်လက်လှဲလျောင်းကာ အမောဖြေနေကြသည် အရင်ဆုံး ထကာ ရေချိုးခန်းကို ထသွားသူက စီလီယာ . ..။
ရေသံ တဝေါဝေါ ကြားနေရပြီး . . .( အဲလက်စ် . ..) လို့ ရေချိုးခန်းထဲကနေ လှမ်းခေါ်သံ ကြားလိုက်ရပြီးသူမရှိရာကို စိုးအောင်..၀င်လိုက်သွား သည် . .။
စီလီယာရေပန်းအောက်မှာရေချိုးနေသည်..စိုးအောင်လဲရေချိုးကန်ထဲကို..လိုက်ဝင်လိုက်သည် . .။စီလီယာ သူ့ကို ဆီးကြိုပြီး ဖက်သိုင်းလိုက်ရင်း ..စိုးအောင်နှုတ်ခမ်းတွေကို သူမက စ .
နမ်းသည်။.သူမလျာလေးကသူ့လျုာကိုလိုက်လံ…တိုက်ခိုက်နေသည်.။.အနမ်း…တွေရှည်ကြာ နေသည် ။ လျာချင်းလုံးတွေးနေကြသည် ..အသက်ရှူသံတွေ..ပြင်းထန်နေသည် .။ ရေပန်းအောက်က လူသားနှစ်ယောက် ရဲ့ပူပြင်းတဲ့ရမက်တွေ ဟာ နောက်တကြိမ် ထကြွ လာပြန်ပြီ. .။ ဒီတခါမှာတော့ စီလီယာက ဦးဆောင်သည် ..စီလီယာက…အပေါ်ကနေသည် ။စိုးအောင်လဲအောက်ကနေ..ပင့်ပင့်ဆောင့်ပေးသည် . .။ စီလီယာ သည် တချီပြီးတချီ ပွဲကြမ်းနိုင်တာ စိုးအောင် အံ့သြမိသည် .. ။ ဒီအချီပြီးတော့တညလုံးလဲ..မအိပ်ရသေးလို့ သူ မှေးကနဲ အ်ိပ်ပျော်သွားသည် …။
သူနိုးလာတော့..စီလီယာ မရှိတော့ . .။ စာတိုလေးတစောင် …
ချန်ထားခဲ့ သည် . .။ အဲလက်စ် …အစစအတွက် ကျေးဇူးတင်တယ် .. ။ မင်းကို ခဏတာ တွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ အမြဲ အမှတ်ရနေမိမှာဘဲ . ..။ တဲ့….။
သူလဲ ပြန်ဖို့ လေယာဉ်ချိန် ကပ်နေတာကြောင့် မနဲထပြေးရသည် . .။ သူ့မြို့ကို ပြန်ရောက်ခဲ့ပြီး..ပုံမှန် အလုပ်ပြန်ဆင်း တဲ့ အချိန် ရောက်လာသောအခါ စိုးအောင် သည် ..စီလီယာ ကို သူတက်နေသည် ဆိုတဲ့ ကျောင်းကြီးမှာ …စုံစမ်းကြည့်လေ သည် ..။ သူမ ရဲ့ လာ့စ်နိမ်း လဲ မသိ ..စီလီယာ ဆိုတဲ့နံမည်…နဲ့ဘဲစုံစမ်းရတော့..ဘာမှ စုံစမ်းလို့မရခဲ့ပေ . .။
( ကိုစိုးအောင် . .)
သူ့ကိုအနောက်ဖက်ကတစုံတယောက်ကခေါ်လိုက်လို့..ပျံလွင့်နေတဲ့..သူ့အတွေးများ. . .ရုတ်တရက် ပြတ်တောက်သွားသည် . .။ အော်..နိုင်လင်းရဲ့ ကာဆင် ..စိုးလင်းဆိုတဲ့လူ . .။ ( ကျနော်တို့ အနောက်ဖက်မှာ အသားကင်နေကြတယ် . .လာစားပါအုံး . .) ( ဟုတ်ကဲ့ . .ကိုစိုးလင်း . .)
စိုးအောင်….စိုးလင်းနဲ့တိုက်ကြီးရဲ့နဘေးကနေအနောက်ဘက်..ခြမ်းကို..လိုက်သွားတော့အ သားကင်နေကြသူတွေ တွေ့သည် . .။ ဂျုံဂျုံလို့ ခေါ်တဲ့ Joan Aung Khin လဲ ရှိနေသည် . .။
စိုးလင်းက(..ဂျုံ..ဒီမှာကိုစိုးအောင်နဲ့စကားပြောလေ. .ဂျုံနေခဲ့တဲ့…မြို့နဲ့..ကိုစိုးအောင်မြို့နဲ့ က သိပ်မဝေးဘူး မဟုတ်လား . .) လို့ ပြောသည် .. ။ ဂျုံဂျုံက ..( ဟုတ်တယ် . .သိပ်မဝေးဘူး . .ဂျုံလဲ စာကျက်ရတာတွေများတာနဲ့ ဘယ်မှ မရောက်ဖြစ်ဘူး . ..) လို့ ပြောသည် . .။ စိုးအောင်လဲ .. ( သိပ်လဲ မနီးဘူးဗျ . .) လို့ ပြောရင်း..ဂျုံဂျုံ ရဲ့ မျက်နှာကို အကဲခတ်လိုက်သည် .. ။ ဂျုံဂျုံ သည် စီလီယာမှ စီလီယာပါဘဲ ..။ သူမ ရဲ့
ညာဖက်ပါးပြင်က မှဲ့နက်ကလေး သည် ဂျုံဂျုံ သည် စီလီယာ ဆိုတာ ထင်ရှားနေသည် . .။
ဂျုံဂျုံ သည် သူတို့အသားကင်များကို တခါသုံး စက္ကူပုဂံတွေနဲ့ ထည့်ကာ စားကြချိန် သူ့လက်ထဲကို စက္ကူ လက်သုတ်ပုဝါလာထည့်ပေးသည် . .။ သူကြည့်လိုက်တော့ . .တခုခုရေးထားတာ တွေ့တာနဲ့ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲကို … ထည့်လိုက်သည် ။ လူလစ်တော့ ထုတ်ကြည့် တော့ ဖုန်းနံပါတ်တခု ဖြစ်နေသည် . .။
အဲလက်စ်နဲ့ စီလီယာ သည် ယခု ..စိုးအောင် နဲ့..ဂျုံဂျုံ အဖြစ် ဆုံနေကြပြီ . .။ စီလီယာ နဲ့ ချစ်ပွဲဝင်ခဲ့ရတာတွေ သူ ပြန်သတိရနေသည် . .။ သူ့ရှေ့မှ ဂျုံဂျုံ သည် လင်ရှိမိန်းမ တယောက် ဖြစ်နေသည် ..။ ပြီးတော့ သူငယ်ချင်း နိုင်လင်းရဲ့ ကာဆင်ရဲ့ မိန်းမ …. ။
အရင်ကဆုံခဲ့တာ ..ဖြစ်ခဲ့တာက ..နိုက်ကလပ်မှာ ဆုံပြီး . မူးပြီး ဖြစ်ခဲ့ကြတာ .. ။ အခုလိုသိပြီးမှ ဇာတ်လမ်း ဆက်ဖို့ မသင့်တော်တော့ပါဘူးလို့ တွေးမိပြန်ပြီး ဂျုံဂျုံပေးတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို မခေါ်တော့ပါဘူး လို့ ဆုံးဖြတ်မိပြန်သည် . ..။
နိုင်လင်း နဲ့ သူ ပြန်ခဲ့ကြပြီး . .စားသောက်ထားတာ ဘိုက်လဲတင်းနေပြီး ရေ
လဲချိုးချင်တာနဲ့ ဟိုတယ်လ်ကိုဘဲ ပြန်ပို့ရန် ပြောလိုက်သည် . .။
ဟိုတယ်လ်အခန်းရောက်တော့..ဒီနေ့ကြုံရတာကို ..မယုံနိုင်အောင်ဘဲ ဖြစ်နေသည် . .။ စီလီယာ နဲ့ဘယ်တော့မှ ပြန်တွေ့တော့မယ် မထင်တာ ..အခုတော့ ဂျုံဂျုံဘ၀ နဲ့ ပြန်ဆုံနေရသည် .။ရန်ကုန်မှာ ပြန်ဆုံနေရ သည် . .။ ရေချိုးပြီး သူ ရေချိုးခန်းထဲက အထွက်.. ဖုန်းမြည်လာ သည် . .။ ဘယ်သူလဲ ကြည့်တော့ မိုးကြီး . .။
( မိုးကြီး . .ပြော . .)
( အေး..စိုးအောင်..ဘာလုပ်နေလဲ…ကိုနိုင်လင်း တို့ဆီက ပြန်ေ၇ာက်ပြီလား . .) ( အေး..အခု ဟိုတယ်လ်မှာ..ခုဘဲ ရေချိုးပြီးတယ် . .)
( စိုးအောင်..မင်းဒီည ဘယ်သွားချင်သေးလဲ . .ငါ အခု အားပြီ . .)
( အေး..မင်းမမောသေးရင်လဲ သွားတာပေါ့..မိုးကြီး . .ကိုယ်ကတော့ ရန်ကုန်မှာနေတုံးနေခိုက်..ရသမျှအချိန် အကုန် လျောက်လည်ချင်တာပေါ့ . . )
( အေး..ဒါဖြင့် ..ငါလာခဲ့မယ် . .နောက် ၁၅မိနစ်ပေါ့ကွာ . .)
( ဟုတ်ပြီ. .ငါ အောက်က ဆင်းစောင့်နေမယ် . .. )
သူ အောက်ဆင်းလာပြီး ဧည့်ခန်း ( လော်ဘီ) မှာ ထိုင်စောင့်နေတုံး ဖုန်းမြည်လာ သည် ..။ မိုးကြီး ခေါ်တာဖြစ်မည် ထင်ပေမဲ့ မိုးကြီးမဟုတ် . .။
( အဲလက်စ် . ..)
အို …ဂျုံဂျုံ .. စီလီယာ တဖြစ်လဲ …ဂျုံးအောင်ခင် …။
( ပြောပါ . ..)
( စီလီယာ ပါ . .မှတ်မိသေးတယ်နော် . .ဘယ်လိုမှမထင်မမှတ်ဘဲရန်ကုန်မှာ….ပြန်ဆုံရတယ် …)
( ဟုတ်တယ်. .ကျနော် က တညတာတွေ့ခဲ့ရတယ် ဆိုပေမဲ့ ..စီလီယာကို အမြဲ အမှတ်ရပြီးထပ်တွေ့ချင်နေခဲ့တာပါ..ကျနော်. .ကောလိပ်ကျောင်းမှာ…လိုက်စုံစမ်းသေးတယ် ….)
( ကိုစိုးအောင် . .ဂျုံတို့အကြောင်း . .ကိုနိုင်လင်းတို့ လုံးဝ မသိပါစေနဲ့နော်….ဂျုံ့အကြောင်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောနဲ့ ..နော်..ဂျုံ အဲဒီတုံးက စိတ်တွေ လေပြီး ..စိတ်တွေ ထွေပြားပြီး..ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်ခဲ့တာ …ကိုစိုးအောင် ကို တကယ်ဘဲ ဖိလိပီနိုတယောက် ထင်ခဲ့တာပါ..ဒီတုံးက ဂျုံက အရက်လဲ တအား မူးနေတယ်လေ . .)
( ဒို့ဘက်ကတော့ စိတ်ချပါ . .ဂျုံနဲ့ ဆုံခဲ့တာ ကို ဘယ်သူ့မှ ပြော မှာ မဟုတ်ပါဘူး . .) ( ဂျုံ ..ကိုစိုးအောင် နဲ့ တွေ့လို့ရမလားဟင် . ..ကိုစိုးအောင်ကော..ဂျုံနဲ့ တွေ့ချင်လား . .) ( ဒို့တတွေမတွေ့ကြရင်..ပိုကောင်းမယ်ထင်တာပါဘဲ..ဒို့ဘက်ကဒို့က…လူလွတ်ဆိုတော့. ကိစ္စ မရှိဘူး..ဂျုံ . . ဂျုံ့ဘက် က . .)
( မှန်တယ်. .ကိုစိုးအောင် . ..ဒါပေမဲ့လေ . .တခါထဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုစိုးအောင် နဲ့ခဏလေး ဖြစ်ဖြစ် တွေ့ချင်တယ် . ..)
စိုးအောင် သက်ပြင်းချသည် . .။ အင်း . .သူ ဂျုံဂျုံ နဲ့မတွေ့တာက ပိုကောင်းမည် . .ဖြစ်ခဲ့တာတွေ . .မေ့ပစ်လိုက်ဖို့ ကြိုးစားနေချိန် . .ဂျုံ့ဘက် က သူနဲ့ . . တွေ့ချင်ကြောင်ြးေ့ပာနေတော့ ခက် သည် . .။ ဂျုံ့လို အင်မတန်မှ ချောလှတဲ့ .. တောင့်တင်းစိုပြေတဲ့ ..မိန်းမတယောက် နဲ့ဘယ်သူ မတွေ့ချင်ဘဲ ရှိပါ့မလဲ . .။ ဒါဟာ.. ငြင်းဆန် တွန်းလှန်ဖို့ ခက်လှတဲ့ .. Temptation ..သွေးဆောင်မှု ဘဲ . .သူ့ စိတ်တွေက နိုင်လင်းတို့ အိမ်မှာ ကထဲက ဂျုံ့ကို ပြန်တွေ့ချိန် . .ဂျုံ့ကိုလူလစ်တဲ့အချိန်…ဖမ်းဆွဲဖက်ပြီး
နမ်းပစ်လိုက်ချင်စိတ်တွေ ..တအားဖြစ်ခဲ့မိရ တာပါ . .။
ဂျုံ့ ဖင်ကားကားလေးတွေ တုန်ခါတာတွေ ကို မြင်ရတော့ . .သူ နဲ့တညလုံး . .ချစ်ပွဲဝင် ( လိုး )ခဲ့ ကြတုံး က ကုန်းပေးထားတဲ့ ဂျုံ့ဖင်တွေကို ..လှလွန်းလို့ သူ ကြည့်မ၀ဘဲ ကြိုက်ခဲ့တာတွေ..ပြန်မြင်ယောင်မိနေခဲ့တာပါ . .။
စိတ်အလို ကို သူ မလွန်ဆန်နိုင် . .။ သူလဲ ဂျုံ့ ကို အလွန်ဘဲ တွေ့ချင်နေတာပါ . .။ ( ဘယ်လို တွေ့နိုင်မလဲ.ဂျုံ . .)
( ဂျုံ မနက်ဖန် ညနေ ဆေးခန်းထိုင်တယ် . . သူ ဂျုံ့ ဆေးခန်းကို လာခဲ့ပါလား . .ဆေးခန်း က ၈နာရီ ပိတ်တယ် . .၈နာရီ လာခဲ့နိုင်မလား . .ခဏ တွေ့ချင်တယ် . .) ( ကောင်းပြီ .. ဂျုံ . .)
ဂျုံဂျုံ က သူမ ဆေးခန်း ရှိတဲ့ နေရာ ကို ပြောပြ သည် . .။ ဂျုံဂျုံ ဖုန်းချသွားအပြီး . .မိုးကြီးေ၇ာက်လာ သည် . .။ မိုးကြီး က ရွှေဂုံတိုင်ဘက်က အနှိပ်ခန်းတွေ ရှိတဲ့ … ဟိုတယ်လ်တခု ကို လိုက်ပို့မည် လို့ ပြော သည် ..စိုးအောင်သည်မိုးကြီးနဲ့လိုက်သွားပေမဲ့.. စိတ်က မနက်ဖန်မှာ ဒေါက်တာဂျုံးအောင်ခင် ဆိုတဲ့ဂျုံဂျုံနဲ့တွေ့ရဖို့ကို …စိတ်စောနေသည် . .။ဂျုံဂျုံ ဟာ လင်၇ှိမိန်းမ တယောက် ဆိုတာလဲ ခေါင်းထဲမှာ . .သိနေသည်. .။ မကောင်းပါဘူး . .မတွေ့တာဘဲ ကောင်းမယ် ထင်တယ် . .ဆိုတာလဲ သူ့ ခေါင်းထဲမှာ မီးအနီေ၇ာင်နဲ့ အချက်ပေးခေါင်းလောင်းသံတွေ မြည်နေသည် .. ။
မိုးကြီး ခေါ်သွားတဲ့ ဟိုတယ်လ်က မဆိုးပါဘူး . .။ ၀န်ထမ်းတွေလဲ ယဉ်ကျေးသည် ..။ သီးသန့်အခန်း နဲ့ နှိပ်တာအခန်းက တသောင်းပေးရ သည် . .။ စိုးအောင် လဲ နှိပ်တဲ့ ကောင်မလေး က သဘောကောင်းလို့ သဘောကျပေမဲ့ ၀တ်ရည်နဲ့တုံးကလို ဘာညာ
သာရကာတွေ မလုပ်ဖြစ် . .။ ( ကြည်ပြာ) ဆိုတဲ့နှိပ်တဲ့..ကောင်မလေး ကို သနားမိပြီးကူညီလိုပေမဲ့ သူလိုချင်တာက ( ဟမ်း ဖုန်း ) ဖြစ်နေသည်..။ကြည်ပြာကို သူ သိပ် စိတ် မ ၀င်စားမိပါ …။ မနက်ဖန်မှာတွေ့ရမဲ့ ဂျုံဂျုံ အကြောင်း တချိန်လုံး .. စဉ်းစားနေလို့ ဖြစ်မည် . .။ သူငယ်ချင်း နိုင်လင်း နဲ့လဲ ဆက်နွယ်နေတာကြောင့် ဂျုံဂျုံ နဲ့..တွေ့တာ မကောင်းဘူး . .လို့ တွေးနေမိတာ အကြိမ်ကြိမ် ဘဲ . .။
အနှိပ်ခန်း က ပြန်ထွက်ခဲ့တော့ မိုးကြီး က .. ( ဘယ်လိုလဲ စိုးအောင် . .ဂွေကိုင်ခဲ့သေးလား . .) လို့မေးသည် .. ။ ( မကိုင်ခိုင်းတော့ပါဘူးကွာ . .နှပိနေရင်းနဲ့ အိပ်ပျော်သွားတယ် ) လို့ သူ ပြန်ဖြေသည် . .။
မိုးကြီး က သဘောကျစွာရယ်သည် . .။ ( အေး . .မင်းလဲ
စိတ်ဆောင်နေတော့ေ၇ာက်ရောက်ချင်း ညထဲက မနားတမ်း သွားလာနေတော့ ပင်ပန်းမှာပေါ့ကွာ )
မိုးကြီး နဲ့ စိုးအောင် ဗဟန်းဘက် က ညဉ့်နက်ဖွင့်တဲ့လဘက်ရည်ဆိုင်တခုမှာ ထိုင်ကြ သည် . .။ လဘက်ရည်သောက်ကြတော့ . .ခွက်တွေ ပုဂံတွေကို ရေနွေးပူ ထဲ နှစ်စိမ်ပြီး ညှပ်နဲ့ ပြန်ဆွဲထုတ်တာ တွေ့လိုက်ရလို့ ..ကျန်းမာရေး..သန့်ရှင်းရေးအတွက် ..အ၇င်ထက် ပိုပြီး လုပ်လာကြတာ တွေ့ရသည် . .။
မိုးကြီးကမင်္ဂလာဒုံဘက်မှာရှိတဲ့ကာရာအိုကေဆိုင်တဆိုင်ကို..ခေါ်သွားချင်ကြောင်း ပြောသည်..။\_မနက်ဖန်ညသွားမလားမေးလို့..မနက်ဖန်ည..မအားဘူး…သူငယ်ချင်းဟောင်းတ ယောက် နဲ့ ချိန်းထားကြောင်း ပြောလိုက်သည် . .။
ဒီည တော်တော် နဲ့အိပ်မပျော်ဘူး . .။
အိပ်မက်ထဲ စီလီယာ ရောက်လာ သည် . .။ စီလီယာ ရဲ့ အနမ်းတွေ ..အကိုင်အတွယ်တွေ ..အထိအတွေ့တွေ . ..ကြောင့် သူ လန့်နိုးလာသည် .. ။ ကန့်လန့်ကာ ဖွင့်ထားလို့ ..မိုးမလင်းသေးဘဲ မှောင်နေဆဲဆိုတာ တွေ့ရ သည် . .။တော်တော်နဲ့ ပြန်အိပ်လို့မရ . .။
နောက်တနေ့မနက် . .ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းတယောက်ေ၇ာက်လာ သည် ။သူနဲ့ဘရိတ်ဖတ်စ်ဆင်းစားသည်. .။
ကုလားလိုဝတ်ထားတဲ့ …..ကုလားကြီးတယောက်က ချပါတီ တွေ လုပ်ပေးနေသည် ..။ချပါတီ နဲ့ အာလူးဟင်း စားသည် . .။သူငယ်ချင်းက ( ငါ..တို့ငယ်ငယ် က ပါတီထဲမှာတော့ ချပါတီက အကောင်းဆုံးဘဲ လို့ ကာတွန်းတခု တွေ့ဘူးတာ မင်း မှတ်မိလား . .) လို့ ပြောသည် . .။နေ့လည်စာအတွက် ကြောငြာထားတာလဲ တွေ့သည် . .။ ပုဇွန်ပတ်ထိုင်းခေါက်ဆွဲတပွဲ ၂ဒေါ်လာ ..ဒန်ပေါက်တပွဲ ၂ဒေါ်လာ ဆိုတာ တွေ့ရတော့ သူတို့ လာခဲ့တဲ့ဆီမှာပေးရတဲ့ဈေးတွေထက်အများကြီး..သက်သာလို့..သူငယ်ချင်းတွေကို ခေါ်ကျွေးအုံးမယ် လို့ စဉ်းစားသည် ..။
သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ တနေကုန် လျောက်လည်စဉ် ..ဒီည ၈နာရီ ဂျုံဂျုံ နဲ့ တွေ့ရမည် ကို သူ ရင်ခုန်နေသည် . .။သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တခြားစကားတွေြေ့ပာနေပေမဲ့ သူ့စိတ်ထဲမှာတော့..ဂျုံဂျုံ …ဘဲ ရှိနေသည်…။ ဂျုံဂျုံ သည် မလွတ်မလပ် ..လင်ရှိနေသည် ။ ဟင်း . .သူ သက်ပြင်း အကြိမ်၁၀၀လောက် ချနေမိသလား . . .။
ညနေ ၆နာရီလောက်မှာ သူ ဟိုတယ်လ်ခန်းကို ပြန်သည် . .။
ရေချိုးသည် ။သူ ဘာလို့ သူ့ကိုယ်အနှံ့ဆပ်ပြာ သေသေချာချာ တိုက်နေမိသလဲ …။
ဂျုံဂျုံ နဲ့ တွေ့ရမှာမို့လား . .။သူ သွားလဲ သေသေချာချာ တိုက်သည် . .။ မောက်သ်ဝေါ့ရှ် နဲ့ ပါးစပ် ပလုပ်ကျင်းသည် . .။သူဂဏာမငြိမ်..ထိုင်မနေနိုင်ဘူး..စိတ်တွေ..လှုပ်ရှားနေသည် . .။သူ သည် ခိုးရန်ကြံနေတဲ့သူခိုးတယောက် လိုဘဲ ..။ အင်း….သူများမယား ကို ခိုးမဲ့ မယားခိုးလေ ..။ သူ ဂျုံဂျုံ ကို မတွေ့ဘဲ နေဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့ မရ .. ။ စိတ်မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူး .. ။ ည ရနာရီမှာ သူ အ၀တ်အစားလဲ သည် . .။ ရနာရီခွဲမှာ သူ ဟိုတယ်လ်ထဲကနေ လမ်းလျောက် ထွက်ခဲ့ သည် .. ။ဟိုတယ်လ်က အငှားကားတွေကို သူ ငှားပြီး ဂျုံဂျုံ့ဆီ မသွားချင် . .။
ဦးဝိစာရ လမ်းမကြီးအတိုင်း ..သူ လမ်းလျောက်ခဲ့ သည် . .။ အငှားကားတစီး လာတာတွေ့လို့ လက်တားလိုက်ပြီး… .ဂျုံဂျုံ ပေးထားတဲ့ လိပ်စာ ကို သွားလိုကြောင်း ပြောလိုက်သည် . .။ကားသမား က ၂ထောင် ..တဲ့..။
ဆေးခန်းရှေ့မှာ ကြေးဝါေ၇ာင် ဆိုင်းဘုတ်လေး ကို သူ တွေ့ သည် ..။ ဒေါက်တာ ဂျုံးအောင်ခင်……တဲ့…..။ သူ လက်က နာရီကို ကြည့်သည် . .။ ၈နာရီ တိတိ . .။ သံဘာဂျာတံခါး..ပိတ်ထားသည် ..။ သော့ခတ်ထားသည် ..။ အော်..ဆိုင်းဘုတ်လေး မှာ ( ဆေးခန်း ပိတ်ပြီ ) လို့ ရေးထားတာလဲ ချိတ်ထားတာဘဲ . ..။ သူ အထဲကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဘယ်သူမှ ရှိမနေ . .။
သူ ချိတ်ထားတဲ့ ကြေးခေါင်းလောင်းလေးကို လှုပ်လိုက်သည် . .။
တောင်..တောင်ကလောင် . .အသံလေး နဲ့ မရှေးမနှောင်းမှာဘဲ တစုံတယောက် အထဲက ထွက်လာ သည် …။ ဂျုံဂျုံ …။ ဒေါက်တာ ဂျုံဂျုံ ….။ ဂျုံးအောင်ခင် . . .။
( ကိုစိုးအောင် . .လာ . .ဂျုံး အလုပ်ပြီးပြီ . .ဂျုံးတယောက်ထဲ..စောင့်နေတာ . .) သူ တို့ နှစ်ယောက် ဆေးခန်းထဲ ၀င်လိုက်ကြသည် ..။ လူနာ စစ်ဆေးတဲ့ အခန်းလေးထဲေ၇ာက်တာ နဲ့ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို စပြီး ဖက်လိုက်သလဲတော့ မသိ ..။ အငမ်းမရဘဲ တယောက်ကိုတယောက် ဖက်တွယ်မိကြပြီး . .နှုတ်ခမ်းချင်း ဂဟေဆက်မိ သွားကြ သည် ..။ ( လွမ်းလိုက်ရတာ စီလီယာ ရယ် . .) ..။( မီးတူး…အဲလက်စ် . .) ဂျုံဂျုံကလဲ ပြုံးစိစိ နဲ့ ပြန်ပြော သည် . .။ ဂျုံဂျုံက..သူ့လုံချည်ကြားကို လက်ကလေးနဲ့ စမ်းရင်း သူ့ ကို .. နမ်းစုတ်နေသည် ..။
မာကျောတောင်မတ်နေတဲ့ သူ့လိင်တန်ကြီး ကို ဂျုံဂျုံ ဆုတ်ကိုင် ပွတ်သပ်နေသည် ..။ သူ့ လိင်တန်သည် မာကျောသထက်ပိုမာကျောလာသည် ..။ အရမ်းဘဲ တင်းမာနေပြီ ..။ လူနာစမ်းတဲ့ ကုတင် ပေါ် သူတို့နှစ်ယောက် နမ်းစုတ်၇င်း ..ဂျုံဂျုံရဲ့ထမိန်ကို သူ
လှန်တင်လိုက်သည်..။ ဂျုံဂျုံကလဲ..သူ့လုံချည်ကို ဆွဲဖြေချွတ်လိုက်သည် . .။ ဂျုံဂျုံ သည် စောစောထဲက၀တ်မထားတာလား..သူလာမဲ့အချိန်နားရောက်တော့..ချွတ်လိုက်တာလားမ သိ…။ ပင်တီ အတွင်းခံမပါ ..။ ထမိန်ကို လှန်တင်လိုက်တာနဲ့ . .ပေါင်တန်ဖွေးဖွေးတွေ နဲ့..ပေါင်ဂွဆုံက မို့ဖေါင်းတဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးကို တပ်မက်စရာ တွေ့မြင်လိုက်ရလေ သည် . .။ သူကတော့ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ၀တ်ထားလို့ ဂျုံဂျုံ က ဆွဲချွတ်တော့ သူက .. ကူညီပြီးချွတ်လိုက်သည် ။သူ့လိင်တန်ကြီးကမကြာခင် ..အလုပ်ဖြစ်တော့မှာသေချာနေတာ သိလို့လားမသိ..။ အရမ်းကြီးထွား မာကျောပြီး ..မတ်မတ်တောင်နေသည် . .။ ဂျုံဂျုံက ပေါင်တန်ရှည်တွေကို ကားပေ..သူကလဲ သူ့လိင်တန်ကိုဂျုံဂျုံ့အင်္ဂါစပ်ပေါက်ဝကိုမှန်းချိန်ကာ ထိုးသွင်းသည် . .။ဂျုံဂျုံသည် ( အင်. . …………………) လို့ ညည်းရင်းသူမ ဖင်တွေကို ကော့ထောင်ပေးသည် . .။သူ့လိင်တန်ကြီး .တင်းတင်းကြီး..၀င်သွားသည် .. ။ တ၀က်ခန့်သွင်းမိ တာသူ အနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီး ..ထပ်သွင်းသည် .. ။ဒီတခါ လိင်တန်တဆုံး သွင်းသည်။.ဂျုံဂျုံသည်….သူ့လက်မောင်းတွေကိုဆွဲဖက်ရင်း…သူမခြေထောက်တွေကိုလဲ..အ ပေါ်ထောင်ထားသည် .. ။
ဂျုံဂျုံရဲ့အင်္ဂါစပ်သည်သူ့လိင်တန်ကို..တင်းတင်းကြီးညှစ်ထားသလို ဖြစ်နေသည် . .။ ( ဒီလို..ပြန်ဆုံရလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး…) လို့ပြောသည် . .။ သူ ဂျုံဂျုံ၇ဲ့ ရှပ်ကြယ်သီးတွေကို ဖြုတ်သည် ။ဂျုံဂျုံ က ကူညီပြီး ဖြုတ်ပေးသည် . .။ ဘရာကိုလဲ ချွတ်ပေးသည် . .။ ဘရာကိုချွတ်လိုက်တာနဲ့ နို့လှလှကြီးတွေ ဘွားကနဲ ပေါ်လာသည် …။တင်းမာနေဆဲ နို့ဖြူဖြူဝင်းဝင်းကြီးတွေ ကို သူ တဖက်ပြီးတဖက်စို့ပေးရင်း ..ခဏတပ်ရက်ကြီး..ရပ်ထားတဲ့ အလုပ်ကို ဆက်လုပ်သည် . .။ဖြေးဖြေးမှန်မှန်..တချက်ချင်း ထည့်ပေးနေသည် . .။ ဂျုံဂျုံသည် အောက်မှ ပြန်ပင့်ပေးရင်း . .( ဆောင့် . .တအားဆောင့်ပါ . .) လို့.. တိုးတိုးလေး ပြောသည် . .။စိုးအောင် လဲ ပုံမှန်လေး လုပ်ပေးနေရာ က ခပ်သွက်သွက် ဆောင့်လေ သည် . .။( ဆောင့်..ဆောင့်..အို…ကောင်းတယ်..ကောင်းတယ် . . .) ဂျုံဂျုံ့ အင်္ဂါစပ်သည် လုပ်ခါစကလောက် မကျပ်တော့ပေမဲ့ စီးစီးပိုင်ပိုင် နဲ့ .. အလွန်ကောင်းနေတာနဲ့ ..သူ လုပ်ကောင်းကောင်း နဲ့ ဆောင့်ပစ်တာ ပြီးချင်လာတာနဲ့ ပြန်ထိန်းရင်း စိတ်ကို တခြားဆီပို့ဖို့လုပ်တာ ဂျုံဂျုံ သိသည် .. ။ ( သူ ..ပြီးချင် ပြီးလိုက် ဂျုံ ..ပြီးပြီ. .) လို့ ပြောတာနဲ့. .သူလဲ.ဆက်တိုက်ဆောင့်ပစ်လိုက်ပြီး… . .ကာမလမ်းဆုံးကို တက်လှမ်းရောက်၇ှိ ( ပြီး ) သွားပါ သည် .. .။ .သုတ်တွေဒလဟော..ပန်းထုတ်လိုက်မိသည် .. ။ဂျုံဂျုံ နဲ့ သူ ခဏ နှပ်နေကြပြီး . .ေ၇ချိုးခန်းဝင်ကာ သန့်စင်ကြပြီးနောက် ဂျုံဂျုံက
အမေရိကန်မှာတုံးကလိုဘဲ..တချီထဲနဲ့ကျေနပ်သူမဟုတ်တာကြောင့်..သူမကဘဲစပြီး..စိုးအောင်၇ဲ့ လိင်တန်ကို စမ်းကိုင်ကာ ဒူးလေးထောက်ပြီး ငုံစုတ်ပေးပါသည် . .။ ဒီအချိန်မှာ သူမ လက်ကိုင်အိတ်ထဲက ဟမ်းဖုန်း မြည်လာသည် ..။ သူမ စိုးအောင် ကို စုတ်ပေးနေရာက..လိင်တန်ကို ပါးစပ်က ချွတ်လိုက်ပြီး ဖုန်းကိုင်လိုက်သည် .. ။ ဖုန်းပြောအပြီး(ဆောရီးဘဲ..ဂျုံဂျုံပြန်ရအုံးမယ်..ယောက္ခမ..နေမကောင်းလို့တဲ့..အရေးကြီးနေ လို့ ပြန်ပြေးရအုံးမယ် သူနဲ့ ..မနက်ဖန်ထပ်တွေ့မယ်လေ . ..နော်. .နော်. .စိတ်မဆိုးနဲ့နော်. ..) လို့ ပြောပါ သည် . .။
စိုးအောင်လဲ..( ရတယ်..ဂျုံဂျုံ .. ပြန်ပါ ..မနက်ဖန်လဲ ဂျုံဂျုံ့အတွက် မလွယ်ရင် ..မတွေ့ပါနဲ့ ဒို့ကြောင့် ဂျုံဂျုံ့ အိမ်ထောင်ရေးထိခိုက်နေပါမယ် . .)လို့ပြောတာကိုသူမ..လက်ညှိုးလေးနဲ့ စိုးအောင်နုတ်ကို လာပိတ် သည် . .။( ဟိတ်. .အဲလို မပြောနဲ့ . .)လို့ ပြောသည် ။ ( သွားစို့ . .) သူတို့ ဆေးခန်းထဲက ထွက် သည် . .။ ဂျုံဂျုံက လိုက်ပို့ပေးမယ် ..ပြောပေမဲ့ သူ လက်မခံပါ . .။ အငှားကားတစီးလာတာတွေ့လို့ တားစီးကာ ပြန်လိုက်သည် . .။ ဟိုတယ်လ်ကို ပြန်တဲ့လမ်းမှာ ..စိတ်ကို မထိန်းနိုင်ဘဲ ဂျုံဂျုံ နဲ့ တွေ့ဖြစ်သွားရပြန်တာကို သူ စဉ်းစားနေသည် . .။.သူ အမှားကျူးလွန်လိုက်တာဘဲ လို့ သူ သိနေပေမဲ့ ဂျုံဂျုံ့ ကို ဆုံတွေ့ချိန် သူ လုံးဝ မဆင်ခြင်နိုင်ခဲ့ဘူး . . .။သူ ဟိုတယ်လ်ပြန်ရောက်ပြီး ရေချိုးသည် ..။ သူ မိုးကြီးနဲ့ နိုင်လင်းကို ဖုန်းဆက်ဖို့ ပြင်တုံး ..မိုးကြီး က အခန်းတံခါးလာခေါက် သည် ..။မိုးကြီး နဲ့ စကားပြောခိုက် နိုင်လင်း လဲ ဖုန်းခေါ်လာ သည် . .။
သူတို့ သုံးယောက် ..ဒီည တနေရာမှာ ကဲကြဖို့ နိုင်လင်း က ဆုံချင်ကြောင်း ပြောသည် . .။သူ နဲ့ မိုးကြီး ..ပထမဆုံး ..နိုင်လင်းကို ဘောက်ထော်မှာ သွားခေါ်ကြ သည် . .။မိုးကြီး က မင်္ဂလာဒုံ က ကာရာကိုကေ ကို ခေါ်သွားသည် . .။ မိုးကြီး က .. သွားနေကျ ဖြစ်မည် . .။ မေထူး ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး က မိုးကြီး ကို တအားဖက်သည် .။ ပေါင်ပေါ်တက်ထိုင်သည် . .။
စိုးအောင်ကတော့သူ့နားထိုင်တဲ့..ချောစု..ဆိုတဲ့…ကောင်မလေး ကို သဘောကျသည် .။ ချောစု သည် သဘောကောင်းသည် ..။မိုးကြီးနဲ့ မေထူး ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး ကဲတာတွေ ကြည့်ရင်း နိုင်လင်းနဲ့ သူ သဘောကျနေသည် . .။ မေထူးသည် တရုတ်ကပြားမလေး ဖြစ်သည်..။ မိုးကြီး ဒီကို ဘယ်လောက် ရောက်ခဲ့ပြီးပလဲ မသိ ..။ တော်တော့်ကို ရင်းနှီး နေကြသည် ။ စိုးအောင်ကတော့ ချောစု ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး ရဲ့ ဘလောက်စ်ထဲ လက်သွင်းပြီး ကျောပြင်လေး ကို ပွတ်သပ်နေသည် ..။ ချောစု အသားအရည် က
တော်တော် ချောမွတ် သည် .. ။ဘရာစီယာ ချိတ်လေးကို သူ ဖြုတ်လိုက်တော့ . .ချောစု က(ဟယ်…ကျွမ်းတယ်ကွာ..ဘယ်လောက်…လုပ်ခဲ့သလဲမသိဘူး……လက်တဖက် ထဲနဲ့..ဘရာစီယာချိတ် ကို ဖြုတ်နိုင်တယ် .. .) လို့ ပြောပေမဲ့ စိုးအောင်လုပ်တာကို မတား .. ။စိုးအောင်လဲ ချောစု နို့ကို စမ်းလိုက်သည် . .။
ဂျုံဂျုံရဲ့နို့တွေလောက်မအောင်မြင်ပေမဲ့…ရှိသင့်သလောက်တော့ ရှိသည် . .။စိုးအောင် ချောစုနို့တွေကို ဖွဖွလေး ကိုင်တွယ်ရင်း နို့သီးဖုလေးတွေကို သူ့လက်ချောင်းတွေနဲ့ ချေနယ်သည် ။ ( အိုး..အကိုရယ်. . .စိတ်တွေထလာညပီး အကို့ကို တက် ကျင့်မိနေအုံးမယ်..) လို့ ပြောသည် . .။ ပျော်တတ်သော ကောင်မလေးတွေ နဲ့ သုံးလေးနာရီလောက် အချိန်ဖြုန်းပြီးနောက် သူတို့ မြို့ထဲဖက်ကို ထွက်ခဲ့ကြသည် . .။ နိုင်လင်းကတော့ သူနဲ့ ထိုင်တဲ့ ( လွယ်လွယ် ) ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး က နံမည် နဲ့ .. ဆန့်ကျင်ဖက် ဖြစ်နေပြီး အကိုင်မခံရုံတင်မက မျက်နှာပါ စူပုတ်နေတာနဲ့ နိုင်လင်း က သိပ်မကျေနပ် . .။ မိုးကြီး က ..( ပြောရောပေါ့ ဗျာ . .ကျနော် လူလဲခိုင်းလိုက်ရင် ရတာဘဲ . ..) လို့ြေ့ပာလေ သည် .။
။.သူတို့တရုတ်တန်းဘက်က..သူငယ်ချင်းတွေဆီသွားကြပြီး.. . .ဘီယာသောက်ကြပြန်သည် . .။တော်တော် ညဉ့်နက်မှ စိုးအောင် ဟိုတယ်လ် ပြန်ရောက်သည် . .။ သူ အိပ်ရာထဲ ရောက်ပြီး မှေးကနဲ အိပ်ပျော်ရုံ ရှိသေးသည် . .။ ဟမ်းဖုန်းမြည်လာသည် . .။ ဟင်..ဂျုံဂျုံ ပါလား . ..။
( အိပ်နေပြီလား . ..)
( ခုနဘဲ ပြန်ရောက်တာ . .မအိပ်သေးပါဘူး . .ပြောလို့ ရရဲ့လား..ဂျုံ . .) ( စိတ်မပူပါနဲ့ . .ကိုစိုးလင်း မရှိဘူး . .ပြောလို့ရတယ် . ..ခုဆက်ရတဲ့ အကြောင်းက ..သူနဲ့ မနက်ဖန် ထပ်တွေ့ဖို့ ပြောမလို့ .. မနက်ဖန် ဆူးလေဘုရားလမ်းမပေါ်က (…)ဟိုတယ် က အခန်းနံပါတ် ( ၈၅၈၅) ကို သူ လာခဲ့မလား . .နေ့လည် ၁၁နာရီကျော် လောက် ပေါ့ .. .ဂျုံ စောင့်နေမယ် . ..)
( ဂျုံ ..ဖြစ်ပါ့မလား . . )
( ဖြစ်ပါတယ်. ..ဂျုံ စောင့်နေမယ် နော် . .ဆီးယူ….ဒါဘဲနော် . .ဂွတ်နိုက်. .) ဂျုံ ဖုန်းချသွားသည် . .။
စိုးအောင်ကတော့…ဂျုံ နဲ့ ထပ်တွေ့ဖို့ကို လန့်နေသည် . .။
သူ တော်တော်နဲ့ အိပ်လို့မပျော် ..။အခန်းနံပါတ် က . .၈၅၈၅ ..။
အင်း . .အိပ်ဖိုက်အိပ်ဖိုက် …ပေါ့….။
နမိတ်ကတော့ ပြနေသည် ..။ အိပ်ဖိုက်အိပ်ဖိုက် …ဆိုတော့ အိပ်လိုက်ဖိုက်လိုက်..။ ပွဲကြမ်းမဲ့ သဘော . ..။
မိုးကြီး နဲ့နိုင်လင်း ကို သူ ညာရပြန်သည် .. ။ ဂျုံဂျုံ ပြောတဲ့ ဟိုတယ်လ်ကြီး ကို သူရောက်တော့..၁၁နာရီထိုးပြီ . .။
အခန်း၈၅၈၅..ကိုရောက်တော့သူတံခါးခေါက်လိုက်သည် .. ။ဂျောက်ကနဲပွင့်လာသည် ..။ ဂျုံဂျုံ ရဲ့ မျက်နှာလှလှလေး ပေါ်လာသည် .. ။ ( လာ . .သူ့ကို မျှော်နေတာ . . ) ဂျုံဂျုံ သည် ည၀တ်အင်္ကျီပါးလေးကို ၀တ်ထားသည် .. ။ အတွင်းမှာ ဘာမှခံဝတ်မထား ..။ ရင်မို့မို့ ကို ရိုးတိုးရိပ်တိတ် တွေ့နေရသည် . .။ ဂျုံဂျုံ့ကို ကြည့်ပြီး သူ စိတ်တွေ လှုပ်ရှားလာသည် . .။ဂျုံဂျုံ သည် သိပ် လှနေသည် . .။ ဂျုံဂျုံသည် အိမ်ထောင်မရှိတဲ့ မိန်းမတယောက် ဘဲ ဖြစ်လိုက်ပါတော့ . .လို့ တွေးလိုက်မိသည် . .။
ဂျုံဂျုံ က ( ဂျုံတော့သူပြန်သွားရင် လွမ်း ကျန်ရစ်တော့မှာ ..သိလား . .သူ့ ကို စွဲနေပြီ . .အမေရိကားမှာထဲက သူ့ကို စွဲသွားရတာ . .) လို့ပြောရင်း သူ့ကို ဖက်သည် ။ သူကလဲ ဂျုံဂျုံ့ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ပြန်ဖက်မိသည် ..(ဒို့ကလဲဂျုံ့ကို..ဂျွန်ဟော့ပ်ကင်းစ် မှာ လိုက်တောင် စုံစမ်းသေးတယ် . .ဂျုံ့ကိုဒို့လဲ စွဲသွားခဲ့တာပါဘဲ . .အခုတောင် စိတ်ထဲ ဂျုံ ဟာ အိမ်ထောင်မရှိတဲ့ မိန်းမ ဆိုရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲ လို့ တောင့်တမိနေတာ . .)လို့ ဂျုံ့ကို ပြောမိသည် . .။
( တွေ့တုံးကို ပျော်ပျော်နေကွာ . .အိမ်ထောင်ကျတာက မိဘ အတင်းပေးစားလို့ . .သူ့ကို လုံးဝ ချစ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး . .ယူသာ ဒို့ကို လက်ခံရင် သူနဲ့ ကွာလိုက်ပြီး ယူနဲ့ နေလိုက်မှာ ..)
ဂျုံ သည် စိုးအောင် ရဲ့ နှုတ်ခမ်းကို စုတ်နမ်းရင်း စိုးအောင် ရဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို ချွတ်ပေးနေသည် ..။ သူမ အတွက်ကတော့ လွယ် သည် . .။ည၀တ်အင်္ကျီရဲ့ ခါးစည်းကြိုး ကို ဖြေချလိုက်ရုံဘဲ ..။ စိုးအောင် ရဲ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ အ၀တ်အစား ဘာမှ မကျန်တော့ တဲ့အခါ ဂျုံ က စိုးအောင် အရှေ့မှာ ဒူးလေးထောက်ခါ ထိုင်ချလိုက်ပြီး .. ( သူ့ဟာကို စုတ်ချင်နေတာ ကြာပြီ . .ခုမှဘဲ အခွင့်ရတော့တယ် . .)ဆိုပြီး . .သူမ ပါးစပ်ထဲငုံလိုက်လေ သည် . .။ ဂျုံ သည် ရှေ့တိုးနောက်ငင် စုတ် နေသလို ..သူမ လျာလေးနဲ့လဲ သူ့ လိင်တန်ဒစ်ကြားထဲကို ထိုးကစားပေးနေသည် . .။ဂျုံသည်… တာဝန်ကျေ စုတ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ တကယ့်ကို စိတ်ပါလက်ပါ နဲ့စုတ်ပေးနေသည် .။
သူ့ ဂွေးဥတွေကိုလဲ ဂျုံက ဖွဖွလေး ဆုတ်နယ် နေသည် . .။ ဂျုံရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် သူ ပြီးချင်လာသည် . .။ ( တော်ပြီ ဂျုံ . .ဒို့ လုပ်ကြစို့ . .) လို့ တားလိုက်ရသည် . .။ ဂျုံက ( သူက ယဉ်ကျေးနေလိုက်တာ . .ပိုပြီး အရသာ ရှိအောင် ကြမ်းကြမ်းပြောပါကွာ .. လိုးကြရအောင် လို့ .. ဟုတ်တယ် . .ဂျုံ့ကို သူ ကောင်းကောင်း လိုးပေးခဲ့လို့ စွဲနေရတာ ..သိလား . .သူ့ လီးကြီးကို လဲ တအားကြိုက်တယ် . သူက တော်တော် လီးတုတ်တဲ့ လူ. . .ရှည်လဲ ရှည်တယ် . ..)
ဂျုံ သည် ပက်ပက်စက်စက်တွေ ပြောနေသည် . .။ဂျုံ့ ရုပ်၇ည် အလှ နဲ့ သူမ ပါးစပ်က ထွက်တဲ့ စကားလုံးတွေ က မအပ်စပ်လှ .. ။
( သူ ဘယ်ပုံနဲ့ လိုးချင်လဲဟင် . .ဂျုံ ကုန်းပေးရမလား . .)
သူ လဲ ဖင်လှတဲ့၈ျုံ့ကိုဖင်ထောင်ကုန်းတဲ့ပုံစံနဲ့ ..လုပ်ချင်နေတာမို့…. . .ခေါင်းညှိမ့်ပြမိသည် . .။ ဂျုံ သည် ဆိုဖါပေါ်မှာ သူ့ဘက်ကိုလှဲ့ပြီး ဖင်ထောင်ကုန်းပေး သည် . .။ ဖြူဝင်းစွင့်ကားတဲ့ ဂျုံ့ ဖင်တွေဟာ ကုန်းပေတဲ့အချိန် ပို လှနေသလိုဘဲ ..။ ဂျုံ့ ဖင်စအိုပေါက် နီနီလေး နဲ့ ဖင်ကြားက ပြူးထွက်နေတဲ့ ဂျုံ့ အင်္ဂါစပ်လှလှကြီး ကို မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းဟာ သူ့တသက်တာ မေ့လို့ရမှာ မဟုတ်တော့ဘူး ..။ ဒီလောက်လှတဲ့ မြင်ကွင်းမျိုး..သူ မတွေ့မြင်ဘူးခဲ့ဘူး . .။ ( လိုးတော့လေ . .ကိုကို . .ဟိတ်..သူ့ ကို ကိုကိုလို့ ဂျုံ ခေါ်မယ် နော် . .)
စိုးအောင် သည် ဂျုံ့ ဖင်တွေ ကို ကြည့်၇င်း လုပ်ရလို့ ပိုပြီး စိတ်ကြွရသလိုဘဲ .။ ဂျုံ သည် ထုံးစံအတိုင်း ရေရေလည်လည် ဆောင့်ခိုင်းသည် . .။ မြန်မြန် ဆောင့်ခိုင်း သည် . .။ဂျုံ့ ခါးသိမ်လေးကို ဆုတ်ကိုင်ရင်း တအားဆောင့်ပေးမိသည် . .။ ( လိုး..လိုး ဆောင့်လိုး…ကိုကို . ..လိုး . .) ဂျုံ သည် သူ့ကို တအား လုပ်ခိုင်းတော့ သူလဲ .. အားကုန်ကြုံးသည် .. ။ဒလစပ် ကြုံးလိုက်သည် . .။
( အား….ကောင်းလိုက်တာ ဂျုံရယ် . . ..အား……………………………………..) သုတ်တွေ ဂျုံ့အထဲ တအားပန်းထုတ်မိရပြီး . .အရမ်းကောင်းတဲ့ ကာမလမ်းဆုံးကို သူ ရောက်ရှိရ ပြီ . .။ဂျုံသည် သူမအထဲက မထုတ်ဘဲ နေပါအုံးဆိုလို့ တပ်ရက် နဲ့လှဲနေကြသည် ။သူ့ လိင်တန်က လဲ အားကြီး သည် ..။ ပြီးတာတောင် ကျမသွား ..။ ဂျုံ့ ဖင်တုံးတွေကြား သူ့လက်ထည့်ကာ ဖင်တုံးကိုဆုတ်ကိုင်ထားရင်း သူ မျက်စိမှိတ်ထားသည် ..။ဂျုံက ( ဂျုံ့ဖင်ကို ကြိုက်လား . .) လို့ မေးသည် ..။ သူလဲ . .( အရမ်းကြိုက်တယ် …) လို့ ဖြေသည် .. ။
ဂျုံသည် ထုံးစံအတိုင်း . .တချီပြီး မကြာခင် နောက်တချီ ..လိုချင်ပြန်သည် . .။ဒီတချီတော့ ဂျုံသည် သူမ က ဦးဆောင်လိုသည် . .။ ( ဒီတခါ ဂျုံကိုကို့ကိုအပေါ်က…တက်လိုးပေးမယ် ကိုကို .) တဲ့ . .။ဂျုံသည် ကာမအားကြီးသော မိန်းမ ဆိုတာ စိုးအောင် မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ရပြီ . .။ကြည့်၇တာ . .ဂျုံ့ ယောင်္ကျားကိုစိုးလင်း သည် ဂျုံ ကျေနပ်အောင် … လုပ်မပေးနိုင်ဘူး ထင် သည် .. ။
ဂျုံသည် အပေါ်က တက်လုပ်တာကိုလဲ တော်တော်ကျွမ်းကျင်နေတာ ကို သူတွေ့ရသည် . .။ သူလဲ ဂျုံ့ကို ဘယ်လို ခွဲသွားနိုင်တော့မလဲ . .။သူလဲ ဂျုံ့ကို စွဲနေပြီ .။ ရေအတူတူဝင်ချိုးရင်းလဲ ဂျုံ့နဲ့ စိုးအောင် တယောက်နဲ့တယောက် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဖက်ထားကြ သည် ..။ ( ဂျုံ တို့ အင်တာနက်ကဘဲ တွေ့နိုင်ကြတော့မယ် ထင်တာဘဲ .ကိုကို . .ဂျုံလေ..ကိုစိုးလင်းကို ကွဲလိုက်ပြီး ကိုကို့နောက်ကို လိုက်လာချင်တယ် . .) တယောက်ကိုတယောက် ..ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ရင်း . .နမ်းရင်း စိတ်တွေ… ပြန်ထကြွလာကြပြန်တော့ စိုးအောင် သည် ဂျုံ့ အင်္ဂါစပ် ကို အနမ်းတွေ ပေးပါရစေ လို့သူ ဂျုံ့ကို ပြောသည် .။
ဂျုံ့ အင်္ဂါစပ်ကို သူ အပီအပြင် ယက်သည် ..။ ဂျုံ့အစေ့ကို သူ လျာ နဲ့ .. ထိုးကလိပေးသည် . .။ငုံကာ စုတ်ပေးသည် . .။
ဂျုံကလဲ အားကျမခံ စုတ်ပေးလိုသည် ဆိုပြီး ၆၉ ပုံစံတပြိုင်နက် . .အပြန်အလှန် … စုတ်ကြယက်ကြသည် . .။ ဂျုံနဲ့ စိုးအောင် နောက်ထပ် နှစ်ချီ လုပ်ဖြစ်ကြသည် . .။ ( ကိုကို မပြန်ခင် အခုလိုဘဲ ဂျုံတို့ နေ့တိုင်းတွေ့ချင်တယ် ကိုကို . .) လို့ ဂျုံ သူ့ကို ပြောသည် .. ။ ( ကိုကိုလဲ ဂျုံ့ကို အမြဲတွေ့ချင်တာပါ ဂျုံ ..) လို့ သူ ဂျုံ့ နဖူးလေးကို နမ်းကာ နုတ်ဆက်ခဲ့ သည် . .။
အငှားကား နဲ့ သူနေတဲ့ ဟိုတယ်လ်ကို ပြန်လာခဲ့ သည် . .။ သူ နဲ့ ၈ျုံဂျုံ ..နောက်နေ့တွေမှာ ဘာဖြစ်လာကြအုံးမလဲ..ဆိုတာကို စဉ်းစားနေမိသလို..စောစောက သူနဲ့ ဂျုံဂျုံ တို့ ချစ်တလင်းခေါ်ပွဲကိုလဲ ပြန်လည်မြင်ယောင်မိနေရပြန်သည် . .။ ( အော်. .ဂျုံဂျုံရယ် . ..မင်းကိုလဲ..ကိုကို စွဲနေရတာပါဘဲ….)